ဖလောင်းကောင်ငါးမွေးမြူရေးအစားထိုး• Yuri BSF BSF Feed
ယ်ယူရန် Feed မပါဘဲ
တည်နေရာ Ranch လောက်အနံ့မရှိဘဲ BSF မော်ဒန်
ဘယ်လို: atomatis အားဖြင့်သင့်ရဲ့တည်နေရာစနစ်ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်များကိုကုဒ် ZIP တစ်စီးရီးတွေနဲ့ပြသနေသည်။
သင်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်တည်နေရာချင်လျှင်ယခုသင်ရှိရာမြို့ / ရွာ၌လစ်လပ် dikolom type ကိုဖြည့်ပါပါ။
ထိုအခါ SEARCH ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
စာအုပ်အခုတော့ Yuri BSF Call
Search ကိုအချင်းဝက် 10 ကီလိုမီတာ25 ကီလိုမီတာ50 ကီလိုမီတာ100 ကီလိုမီတာ200 ကီလိုမီတာ500 ကီလိုမီတာ
ဘွတ်ကင်အဘို့အ Yuri BSF လေ့ကျင့်ရေး 0812-2105-2808 ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
မြင့်ပရိုတိန်းအမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေကျန်းမာတိရိစ္ဆာန်များပြည့်စုံအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စွယ်တိုးတက်မှု၏ Nutisi အကြောင်းအရာ။
များပြားလောက်မဖြစ်မနေပျံသန်း အနံ့အခမဲ့လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေ agaDownload ။ SAFE မြိုးဆကျအတှကျလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းသရုပ်ပြအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
အနံ့လောက် BSF မရှိရင်ခေတ်သစ်ငါးမွေးမြူရေးငါးနှင့်ကြက်စာကျွေးဖို့လောက်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ရလဒ်အလုပျသဖြစ်နိုင်အောင်စိုက်ပျိုးမှုလောက်ညာဘက်အနံ့မရှိဘဲ, စက်မပါဘဲ, မူးယစ်ဆေးဝါးမပါဘဲနှင့်အချဉ်ပေါက်ခြင်းမရှိဘဲရမည်ဖြစ်သည်။
အထွက်နှုန်းလောက်ဟာငါးပိသို့လုပ်ငန်းများ၌နှင့်လောက်, လောက်နှင့်တောင့်မုန့်ညက်လောက်သို့မဟုတ်အသက်ရှင်လျက် (လတ်ဆတ်တဲ့သားလောင်းသင်) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
ဤနည်းကိုသင်ပြန်တိုးကနေ feed ကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲမွေးမြူရေးအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်။
လုံးလေးများနှင့် feed ကိုစတိုးဆိုင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
လောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး? ရောင်းဖို့ Yuri BSF !!!
Yuri BSF ဝယ်လိမ့်မယ်လို့ပဲ။
Yuri BSF စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြီးသားထောက်ပံ့ငွေမိတ်ဆွေများကို Rp100.000.000 / ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ပေးသည်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့လောက်နှင့်အတူပြန်အမ်းအကူအညီများ - NO RIBA !!!
DUTA Yuri BSF သင့်ရဲ့လယ်ယာအပေါ်ကိုတင်ပြဖို့အဆင်သင့်။
လယ်မြေတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လမ်းညွှန်မှုအလေ့အကျင့်များကို 100 မြို့ထက် သာ. DUTA Yuri BSF ပစ္စုပ္ပန်။
99 တည်နေရာ Check
Yuri အတွက် UNIVERSITY BSF သငျသညျအထူးလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်မြင့် level ကိုပေးလိမ့်မည်။
အနံ့မရှိဘဲခေတ်မီစိုက်ပျိုး bsf အဆိုပါ SOP (စံစစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) နဲ့အညီအနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf ၏စိုက်ပျိုးမှုသေချာစေရန်။
နောက်ထပ် Yuri BSF တက္ကသိုလ်
BSF Yuri ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်သငျသညျအလိုအလြောကျ Coop လောက်အင်ဒိုနီးရှား၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။
ပူးတွဲစီးပွားရေးလောက agrobinis လောက်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း BSF Yuri အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ခြင်း။
အဆိုပါ CSR အစီအစဉ်ကိုသင်ယူချင်သောသူတို့အဘို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf စိုက်ပျိုးတဲ့အထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်
ဒါကြောင့် Yuri BSF အစီအစဉ်ကိုနံပါတ်တစ်အဓိကအပေါင်းတို့နှင့်အလုပ်အစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။
99 တည်နေရာ Ranch လောက် Check
အဘယ်ကြောင့်မြိုးဆကျမတ်ေတာသ Yuri BSF
Yuri Gray ကသည်းခံခြင်းငါ့ကိုထူးခြားသောပဲ့ထိန်းသည်သူ၏ဆရာစူပါစိတ်မရှည်သောကွောငျ့, ရုံး၏ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားအရေးမပါဘူး
အနံ့မရှိဘဲ 99 တည်နေရာ Ranch လောက် Check
က 99-60% ရောက်ရှိကြောင်း feed ကိုပမာဏကိုငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကွောငျ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲက 70% ငါးခူနှင့်အခြားငါးလယ်သမားများ, လုံးလေးများကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့ငွေကိုဖြုန်းရပ်ရန်, သင်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ပင် 80% ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့အစပြုသူ feed ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်။
အထိ 82% များ၏ကြက်စာကျွေးကုန်ကျစရိတ်ငွေစုခံစားပါ။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကြက်အများဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်းထိုကဲ့သို့သောမုန့်ညက်လောက်အဖြစ်လောက်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသင့်ကိုယ်ပိုင်ကြက်ငှက်စေ။ ဒါဟာသင်လျှော့ချခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်အရေအတွက်ကတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်အာရုံစိုက်ဖို့အချိန်
တိုက်ရိုက်အနံ့မရှိဘဲခေတ်မီစိုက်ပျိုး bsf သည့်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုအားအထူး HP ကစောင့်နေကြလော့။
PlayStore Yuri BSF အတွက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတဲ့ applications များသူမ၏နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လောက် BSF ကနေအမြင့်ဆုံးရလာဒ်များရရှိရန်, မတိုင်မီကကြောင့်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသင့်သလုပ်ငန်းများ၌, တိရိစ္ဆာန်ငါးနှင့်ကြက်အဖြစ်ပေးထားခဲ့သည်:
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ / လတ်ဆတ်တဲ့ပိုး
အောင်မြင်မှုရဲ့တစ်ဦးကအတားအဆီးစီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာလောက်လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးအကြောင်းကိုအရာတို့ကိုဖြေဆိုရန်, အထူးပြုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်း Yuri BSF မေးရန်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းယင်ကောင်သိတယ်။ ဤရွေ့ကားအင်းဆက်ပိုးမွှားအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်နေကြသည်။ အနံ့တစ်ခုအရင်းအမြစ်အစားအစာအနံ့မရှိသောကြောင့်လာကြ။ ဤရွေ့ကားယင်ကောင်စိတ်ပျက်စရာမှတပါး၎င်းတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သော (တီဘီ), disentriamuba, ဝမ်းရောဂါနှင့်အခြားရောဂါများအဖြစ်ရောဂါများကိုသယ်ဆောင်။
အဆိုပါယင်ကောင် morphologically ယင်ကောင်အတောင်ပံနှစ်ခုအားလုံးအတွက်မူရင်းတောင်ပံနှင့်ပျံနေချိန်တွင်ချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အစေခံကြောင်းသေးငယ်တဲ့အတောင်တစ်စုံ seapsang နေကြသည်ရှိခြင်း, တိုတောင်းသောအင်တင်နာရှိသည်, တစ်ဦးအင်းဆက်ပိုးမွှား (အခွဲအမိန့် cyclorrapha အလို့ငှာ Diptera) ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ယင်ကောင်ဒါခေါ်အားနည်းချက်ကို-ဘွားအင်းဆက်ပိုးမွှားရှိပါသလဲ တစ်ဦးယင်ကောင် 125.000 banteri ဘက်တီးရီးယားပတ်လည်ရှိညစ်ပတ်အရပ်ပေါ်မှာဆင်းသက်သောအခါထိုဆင်းသက်ရာအရပျ၌ကနျြပါလိမ့်မည်လို့ပဲ။
ဒါဟာယင်ကောင်အစာစားခြင်း၏တစ်မူထူးခြားသောလမ်းအဖြစ်သဘာဝကျကျတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအစားအစာအပေါ်ဆင်းသက်သောအခါ, ယင်ကောင်အစာစားခြင်းမပြုမီကသူ၏ပါးစပ်ထဲကနေအရည်ကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။
အစာကျွေးဖို့, တစ်နေ့တာအတွင်းတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားမှုပျံသန်း။ မျိုးစိတ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးကယင်ကောင် 75-126 ရက်အတွင်း 1-4 ကြက်ဥနှင့်ပေါက်အကြားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ယင်ကောင်တစ်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ချိန်ကဇီဝ5မိနစ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တောဒါပေါ်မှာဝမ်းလျှောစေခြင်းနှင့်မယ်လို့လူသားတို့စားသုံးလျှင်။
ဘဝသံသရာ sd530 ရက်ပေါင်းအကြားကွဲပြားခြားနားသည်ပျံသန်း။ ယင်ကောင် mencaai ဘဝ5ရက်ပေါင်း hikjau စဉ်အကြောင်းကို 8-30 ကာလ၏ bsf အလွန်တိုတောင်းသောအသက်တာကိုပျံ။
ကျနော်တို့ဖြုန်းတီးသောအမှိုက်သရိုက်သို့မဟုတ်အစားအစာမကြာမီပျံသန်းသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သည့်တစ်နာရီလျှင်အကြောင်းကို 8 ကီလိုမီတာ၏မြန်နှုန်းမှာပျံသန်းနိုင်စွမ်း houseflies ။
အထူးသဖြင့်မိမိအယင်ကောင်များ၏မွေးမြူရေးကိုလိုနီ fertile တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏။
အကျိုးကျေးဇူးများက Man သည်ယင်ကောင်
အဆိုပါယင်ကောင်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ဘယ်ဒီတော့ပေါ်တွင်သူတို့မကြာခဏပိုးလောင်းခေါ်တော်မူသောအမျိုးအနွယ်သို့မဟုတ်လောက်သို့မဟုတ်လောင်းသင်သို့မဟုတ် Beranga သို့မဟုတ်ပိုးသို့မဟုတ်ကျဇယားသို့မဟုတ် uget-uget ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့နိုင်ငံများတွင်ကလေးလူသားတွေအတွက်စားသုံးမှုများအတွက်ရောင်းချခြင်းပျံ။ သူတို့ကထိုကဲ့သို့ခေါက်ဆွဲ, ဟင်းချိုနှင့်ပီဇာအဖြစ်အထူး menus တွေပေး။
ဆေးပညာလောကရှိကလေးများမကြာခဏ "လောက် theraphy" ဟုခေါ်ရောဂါကျော်လွန်ကုသမှုတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်ပိုးသို့မဟုတ်လောင်းသို့မဟုတ်လောက်သို့မဟုတ် uget-uget ပျံသန်းသော။
နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးကသူ့ refilin ဗီဇများ၏ content မကြာခဏတစ်ကော်အဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှအသုံးပြုသောဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကော်နှင့် elasticity ရော်ဘာပင်တို့၏ရည်ထက်အများကြီးအစွမ်းရှိ၏။
Refilin ဗီဇလည်းသွေးလွှတ်ကြောများနှင့် Meina အမျိုးမျိုးအာရုံကြောရောဂါများကိုကုသနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်မှာရှိနှစ်ဦးစလုံးဟာအာရုံကြောကဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်အောက်စီဂျင်များမကြာခဏပိတ်ဆို့ du ။
ညိုညစ်ရောင်နှင့်ဘက်တီးရီးယားများအပြင်, ပိုးကိုလည်းတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်သည်စွန့်ပစ်၏ပြိုကွဲ, အိမ်ထောင်စုစွန့်ပစ်, စက်မှုစွန့်ပစ်, လူ့စွန့်ပစ်, ခြေး, အသေကောင်များနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ oragnik ။
အခွားသောအကြိုးကြေးဇူးမြားအများကြီးအင်ဒိုနီးရှားရှိလူများအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ကိုသဘာဝနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာမွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းငါးနှင့်ကြက်သို့ process ဖို့လောင်းဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါလောက်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးငါးပိလောက်, လုံးလေးများလောက်, ဒါပေါ်မှာလောက်မုန့်ညက်, လတ်ဆတ်လောက်, chrispy လောက်, လောက်ခြောက်သွေ့လောက်ကပ်, လောက်အေးခဲ, မီးဖိုလောက်နှင့်သို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းများ၌လောက်မွေးမြူရေးတိုက်ရိုက်ပေးထားသို့မဟုတ်ငါး, ငှက်နှင့်တွားသွား၏ feed ကိုပေးဝေအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။
သဘာဝအများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာမွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းအဘို့အအသုံးချလောက်အာဟာရကြွယ်ဝလောက်တစ်ဦးပြည့်စုံအမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်မြင့်မားလို့ပဲ။ အဆိုပါပရိုတိန်း 40-56% အကြားပ္ပံပါရှိသည်။
မတူကွဲပြားသောယင်ကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်။ သူတို့ရဲ့အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကြီးတွေနှင့်အသေးစားသွယ်လျ, ရဲရငျ့စှာပွော။
ပျံသန်းခေါင်းကိုကြီးမားတဲ့ဝင်းလက်ျာဘက်၌နှင့်ခေါင်းပေါ်၌ဖြစ်ကြောင်းမျက်စိ, အင်တင်နာ, ocelli, ပါးစပ်ပါဝင်ပါသည်။ မျက်စိခေါင်းကိုအတူရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ယင်ကောင်ပတျဝနျးကငျြလှုပ်ရှားမှုဆီသို့ဦးတည်ရှုမြင်၏ညှနျကွားထိန်းချုပ်ဖို့ကိရိယာတခုအဖြစ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုများမှ senitif နှင့်အာရုံခံရှိသည်။
, Yaw လှုပ်ရှားမှုပျံသန်းဖွင့်နှင့်လှိမ့်အဖြစ်အရာဝတ္ထုများ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရန်ဒီတော့အထိခိုက်မခံ။ယင်ကောင်အပေါငျးတို့သမျိုးစိတ်, အံသွားခဲ့ကြောင်းအဘယ်သူအားမျှ။
သေးငယ်တဲ့ granules (ဝတ်မှုန်) နှင့်အရည်အစားအစာယင်ကောင်များကကြသည်ကိုလောင်လေ၏။ အဆိုပါအစိုင်အခဲများစားစရာဘို့အမျှသူတို့ကမစားနိုင်ဘူး။
သို့သော်ယင်ကောင်အချို့အမျိုးအစားများကိုတစ်ဦး crosswise ခွဲစိတ်စေခြင်းနှင့်သူတို့၏အသွေးကိုစို့ရန်သူ၏နှုတ်၌ semcam ဓါးများ tabanidae ။
သောအစိတ်အပိုင်းဒုတိယရှိပါတယ်အတွက်အတောင်ပံများနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြွက်သားကျင်းပရန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ segment တဦးတည်းနှင့်သေးငယ်သုံးခု။ တတိယ thoracic ချပေးအတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်တန်ပြန်အဖြစ်ဇက်ရှိပါတယ်။
အဖော်ရှာသို့မဟုတ်အဖော်ရှာတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက် facing သူတို့ရဲ့အနေအထားနှင့်အထီး၏အနေအထားကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအတွက်ပျံအခါ။
မကွာအချင်းချင်းလှည့်အနေအထားကျောအဖော်ရှာပြီးနောက်။ မိဘ gravid အမျိုးသမီးယင်ကောင်ဟာသူတို့ရဲ့ဥ, ဥဖို့နီးစပ်သို့မဟုတ်အစားအစာအထက်တွင်နေရာတစ်နေရာရှာရလိမ့်မည်။
ကြက်ဥပေါ်ကြက်ဥကို တင်. ရသောယင်ကောင် bsf (hermetia illucien) ၏အမျိုးအစားများမဟုတ်လျှင်အစားအသောက်ကိုညွှန်ကြားပေမယ့်အစားအစာအရင်းအမြစ်န်းကျင်ပါဘူး။
တည်နေရာယေဘုယျအားဖြင့်ဆည်းကပ်နေသည်လောင်းသို့အစားအသောက် semala အဖြစ်တာစားနပ်ရိက္ခာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အား BSF ကနေအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကြက်ဥပေါက်သည်အထိ 2-4 ရက်ပေါင်းကြာနေချိန်မှာကြက်ဥယေဘုယျအားနာရီအတွင်း Hatch ပျံသန်း။
အသီးယင်ကောင် (Drosophila မျိုးစိတ်)
ယင်ကောင် (sarcophagidae) အမဲသား
အစိမ်းရောင်ယင်ကောင် (Calliphora vomitoria)
မြင်းယင်ကောင် (မိသားစု tabanidae)
စွန့်ပစ် (psychodidae) ပျံ
သဲယင်ကောင် (spiriverpa lunulata)
အဆိုပါအိမ်ရာယင်ကောင် (musca domestica)
BSF (hermitia illucien) ပျံ
ဒါကြောင့်အသီးယင်ကောင် infests ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသီးယင်ကောင်လယ်သမားတစ်ပိုးမွှားဖြစ်လာသည်။ ဤသည်ယင်ကောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အစားအစာ၏သားကိုမွေးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်များစွာသော diperkebunan အတွက်ရရှိနိုင်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားသူတို့အဘို့စံပြရာသီဥတုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
အညိုရောင်-အဝါရောင်သို့မဟုတ် mottled ခန္ဓာကိုယ်အရောင်
လခြမ်းနဲ့တူ shaped egg
ကြက်ဥအရေပြားအောက်မှာအုပ်စုများတွင်သို့မဟုတ် disabled ခံတွင်းအနာစိမ်းဒါမှမဟုတ်အသီးအတွင်း၌ထား
5 မီလီမီတာရှည်လျား pupa
ဝမ်းဗိုက်3transverse များမှာ
အထီးယင်ကောင်ကိုပိုမို rounded အစာအိမ်များမှာ
ဘဝသံသရာ 16 ရက်ပေါင်းကြာရှည်ခံသည်။
လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင် 7-30 ရက်ပေါင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 2-9 ပတ်တိုက်ရိုက်ပျံ
တဦးတည်းတခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်မတူညီတဲ့နှင့်ထူးခြားသောကြောင်းပျံ။ ယင်ကောင်သူတို့အနာပေါ်တွင်တင် ovoviviparous ဆိုလိုသည်မှာအသားဖြစ်ကြဖုန်, အသေ, အော်ဂဲနစ်ဆွေးမြေ့, စတာတွေကသူ့လောက်ကြက်ဥမရှိကြပေ။
ဇာတိပကတိအားဖြင့်အမျိုးသမီးပျံသန်း larvivara များမှာ
long-6 14 မြင်းမီလီမီတာပျံ
3 အဆိုပါ dorsal thorax အပေါ်မှောင်မိုက် longitudinal ဒဏ်ချက်ရှိပါတယ်
ဇာတိပကတိအ Fly ဘဝက Cycle
အသက်အရွယ် 14 -30 နေ့ကပျံ
40-80 အကြားပထမဦးဆုံး instar လောင်းကို တင်. အခါတိုင်း
bluebottle တော်တော်များများ, ယေဘုယျအားဖြင့်, အလတ်စားနှင့်အကြီးစားရိုက်ထည့်ပါ။ အရောင်ဝမ်းဗိုက်ဖန်, ငွေ, တောက်ပ, အစိမ်းနှင့်မီးခိုးရောင်ရှိခဲ့သည်။
Bluebottle ခြွင်းချက်နိုင်စွမ်းရှိသည်, သူတို့ပဲသူတို့က hinggapi အစားအစာဖို့ဘက်တီးရီးယားနှင့်ရောဂါပိုးထားရန်တစ်စက္ကန့်လိုအပ်ပါတယ်။
လူကြီးအစိမ်းရောင်ယင်ကောင် 1 /4"-1 / 12" လက်မအရှည်
ဝမ်းဗိုက်ရောင်စုံဖန်, ငွေ, တောက်ပ, အစိမ်းနှင့်မီးခိုးရောင်
အကြီးစားရင့်ကျက်လောင်း3/4"လက်မ
လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင် 7-12 ရက်ပေါင်း
အစိမ်းရောင်ယင်ကောင်ကြက်ဥ 8-18 နာရီ Hatch ပါလိမ့်မယ်
ပုပ်အသားသို့မဟုတ်ငါးအသေကောင်, ဒါမှမဟုတ်ချေး, ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်စွန့်ပစ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေသောမရပ်မနားကိုက်ပျံ။ သူမ၏ကိုက်အလွန်နာကျင်သည်။
လူကြီးမြင်း၏အရှည် 25mm ပျံ
မြင်း Fly ဘဝက Cycle
ပြီးတာနဲ့ 100-1.000 ဘောဇဉ်အကြောင်းကိုရေးသားထားပါတယ်
ကြက်ဥ 5-7 ရက်ပေါင်းအကြား Hatch လိမ့်မယ်မြင်းပျံတက်
လူကြီးမြင်း၏ဘဝသံသရာ 30-60 ရက်ပေါင်းအကြားပျံ
Long က2မီလီမီတာယင်ကောင်
ကြက်ဥ 1-6 ရက်ပေါင်း Hatch ပါလိမ့်မယ်
လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင် 10-50 ရက်ပေါင်း
Pupa 1-3 ရက်ပေါင်း
နှစ်ခု type ကိုသဲယင်ကောင်ရှိပါတယ်:
ယင်းကမ်းခြေ, ဒီရေတောများ, သစ်တောများနှင့်ခြံတက်ကြွကျွဲန်းကျင်ကသူတို့ရဲ့နေရင်းဒေသများ 9-4 နံနက်နာရီအကြားညဥ့်မှာအသကျရှငျမျိုးစိတ်ပျံသန်း။
Phlebotomus (leishmania ကပ်ပါး vector)
Lutzomiya (leishmania ကပ်ပါး vector)
သူ့ခန္ဓာကိုယ် hunched ခဲ့သည်
သူတို့ဟာ 30-50 အနက်ရောင်ကြက်ဥအကြား lay
10-အရှည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 11mm ပျံ
အဟောင်းကိုနှစ်ပေါင်း2အထိ Living
1-2 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ Pupa သို့မဟုတ်ပိုးအိမ်
အိမ်သူအိမ်သားယင်ကောင် (musca domestica)
အိမ်မျိုးစိတ်ပျံသန်းကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်အသုံးအများဆုံးယင်ကောင်သည်နှင့်ရောဂါဟာ Vector ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်အမျိုးသမီးများသောအားဖြင့်တစ်ခါသာမိတ်ပျံသန်း။
သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောအစားအစာစွန့်ပစ်, အသေကောင်သို့မဟုတ်မစင်အဖြစ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းဆွေးမြေ့အတွက် 100 ကြက်ဥန်းကျင်ကိုတင်သောခဲ့ကြသည်။
လူကြီးအိမ်၏အရှည် 5-8 မီလီမီတာအကြားပျံ
သူ၏မျက်နှာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို taster များအတွက်ဒဏ်ငွေဆံပင်အကျင့်နှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်
လေးသွေးကြောအတန်ငယ် tapered အတောင်ပံနှင့် (ကွေး) ဖြောင့်ကိုမ
ဦးခေါင်း၏အစွန်အဖျားမှ tapering ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်
တစ်ဦးအစွန်အဖျားကိရိယာနောက်ဘက်2ဖူး
သငျသညျလူကြီးရောက်ရှိဖို့ 12 မီလီမီတာရှည်လျားလောင်း
bsf သို့မဟုတ်အနက်ရောင်စစ်သားပျံသန်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင် 15-16 မီလီမီတာနှင့်အနက်ရောင်များအကြားတစ်ဦးကိုယ်ထည်အလျားရှိယင်ကောင်။
အလွန်ကောင်းစွာများပြားနိုင်ပါတယ် Black ကစစ်သားအပူပိုင်းနှင့်နွေးသမရာသီဥတုအတွက်ပျံသန်း။ Keberadaannnya ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့သည်နံနက်အတွက်ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်နှင်း၏ဝတ်ရည်နို့စို့ခြင်းဖြင့်အစာကျွေးရှိရာပန်းပွင့်အပင်များ, မပေါက်ပါဘူး။
ထိုအယင်မစားကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲအိမ်ယာတွင်တွေ့မြင်။ သူတို့ဥကိုတင်မှအမှိုက်သရိုက်, မိလ္လာနှင့်အမှိုက်အများကြီးဆံ့နေရာတွေအတွက်ကိုပိုပြီးမြင်နိုင်။ အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအချိန်အတွက် 185 ချနိုင် - 1.235 ကြက်ဥ။
မျိုးစိတ်: Hermetia illucens
ဒွိစုံအမည်: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Leucopa Musca Linnaeus, 1767
Hermetia Fabricius, 1805 rufiventris
Hermetia Macquart, 1834 pellucens
Hermetia Copello, 1926 illuscens
Hermetia var illucens ။ nigritibia Enderlein, 1914
ဖျေါပွခကျြ BSF ပျံ
BSF အရွယ်ရောက်ပြီးသူယင်ကောင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 16 မီလီမီတာ (5 / 8 လက်မ) ဖြစ်ကြသည်။ အနက်ရောင်အများစု၏ကိုယ်ခဲ့သောဤအလတ်စားယင်ကောင်။
အရောင်များကိုရင်ဘတ်ပေါ်တွင်အနက်ရောင်သတ္တုအပြာလုပ်ဖို့အစိမ်းရောင်ကနေအထိနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဝမ်းဗိုက်၏အနီဆုံးကိုအတူအတူ။ Tergite ဒုတိယဝမ်းဗိုက် (အစာအိမ်) ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စဧရိယာရှိပါတယ်။
ကျယ်ပြန့်ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အလွန်ကြီးမားတဲ့မျက်စိနှင့်အတူ။ တစ်ဦးအင်တင်နာအရှည်ဦးခေါင်း၏နှစ်ကြိမ်အရှည်ရှိပါတယ်။6tarsi အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်ခြေထောက်ရှိပါတယ်။
Bsf တောင်ပံကဲ့သို့အမြှေးပါး။ ထိုအခါချိုးမှာဝမ်းဗိုက်အတွင်းအလျားလိုက်ခေါက်အတောင်ထပ်နေကြသည်။ Black ကစစ်သားယင်ကောင်တစ်ယင်ကောင်စကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ BSF WASP
အရွယ်အစား, အရောင်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန် WASP ဆင်တူနှင့်တူသော၏ဘေးထွက်ကနေဘယ်အချိန်မှာရှုမြင်ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကြောင့်နကျယ်ကောင်ယင်ကောင်များကဲ့သို့သက်တမ်းတိုးသောအင်တင်နာ၏။
Tarsi ပြန်ဖျော့ပျံနှစ်ယောက် "ပြတင်းပေါက်" ပွင့်လင်းသေးငယ်တဲ့ဝမ်းဗိုက် segment ကိုအခြေခံရှိခဲ့ပါတယ်။
သောယင်ကောင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ "နကျယ်ကောင်ခါး" ရှိသည်ဖို့သလိုပဲစေသည်။ Black ကစစ်သားလောင်းပျံသန်း houseflies နှင့် bluebottle ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။
Black ကစစ်သား Fly ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
စစ်သားတစ်ယောက်၏ဆုံးကျယ်ပြန့်ကိုယူအားသာချက်ကျောပျံသန်းကလေးများသို့မဟုတ်ပိုးလောင်းသို့မဟုတ်လောက်သို့မဟုတ် uget uget သို့မဟုတ်ပိုးဖြစ်ကြသည်။
နောက်ပိုင်းဆေးပညာ, ရဲ, restouran, ငါးမျိုးဆက်များကြက်လယ်သမားများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွားသွားနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာလယ်ကွင်း dioleh ။
22 BSF လူ့အဖော်မွန်များဖြစ်ပေါ်စေ
1 ။ လူသားတွေဟာအဘို့ကို Safe
Black ကစစ်သားအန္တရာယ်နှင့်လူသားများအတွက်လုံခြုံမ Fly ။ houseflies နှင့် bluebottle တူသော BSF အန္တရာယ်ကင်းယင်ကောင်။
ဒါဟာလူသားရောဂါ virus သယ်ဆောင်ဖြစ်လာပါဘူးဒါကြောင့် BSF အရွယ်ရောက်ပေမယ့်တစ်ခုသာသောက်ဘို့နှုတ်ရှိပါတယ်။ BSF ယင်ကောင်လူသားတွေကိုကဘေးကင်းလုံခြုံစေသည်ကိုက်သို့မဟုတ်လက်နက်ကြပါဘူး။
သူ၏အသက်တာ BSF စဉ်အတွင်းသူတို့ပဲပန်းပွင့်နှင့်နံနက်နှင်း၏ဝတ်ရည်သောက်ရရှင်သန်ရန်, မစားဘူး။
ဤသည်လူသားတွေကို BSF လုံခြုံစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ BSF မရှိသလောက်အိမ်ထဲကြုံတွေ့ဘယ်ကြောင့်ထိုပါပဲ။
BSF လောင်းနှင့်လူကြီးများပိုးမွှားသို့မဟုတ် virus သယ်ဆောင်၏အမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းမထားပါ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာအနက်ရောင်စစ်သားလောင်းအနီရောင်ပိုးကောင်များအားဖြင့်ထိုအတူအခန်းကဏ္ဍပျံသန်း။
အော်ဂဲနစ်အလွှာကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်မြေဆီမှအာဟာရ restore နိုင်စွမ်းကြောင်းကိုစွန့်ပစ်, မိလ္လာနှင့်ချေး၏ပြိုကွဲအဖြစ် ie ။
ပရိုတိန်း BSF လောင်း၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသတင်းရပ်ကွက်များ
အနက်ရောင်စစ်သားပျံသန်း (BSF) ၏လောင်း, aqua ယဉ်ကျေးမှု, တိရိစ္ဆာန်, တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့အာဟာရအတွက်အလွန်ကောင်းမြတ်သောအရာသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ပရိုတိန်းအရင်းအမြစ် (ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ) ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလောင်းတစ်ဦးအလွန်ကြီးမားတဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုတနေ့အတွက်အလွှာ badanya နှစ်ခုကြိမ်အလေးချိန်အထိသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းရှိသည်။
လောင်းလည်းအိမ်ထောင်စုဆွေးအစားအစာငယ်များ, junk ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်အမှိုက် bins စျေးကွက်စေရန်သုံးနိုင်သည်။
ခြေးနှင့်လူ့စွန့်ပစ်အပါအဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများ, စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်မွေးမြူရေးစွန့်ပစ်, အပါအဝငျ။
2 ။ BSF ပါးစပ် "ပြီးပြည့်စုံသောမ"
စားမသာတွေဖြစ်တဲ့ဝတ်ရည်သို့မဟုတ်နှင်းကဲ့သို့အရည်လောင်နိုင်အောင်အိမ်သူအိမ်သားယင်ကောင်မတူဘဲ, BSF "မစုံလငျ" ဟုပါးစပ်အပိုင်းအစရှိပါတယ်။
အဲဒါကိုရောဂါပြန့်နှံ့ပါဘူးဒါကြောင့် BSF, ယင်ကောင်ကဲ့သို့အခြားအစာခြေအင်ဇိုင်းတွေနှင့်အတူစားနပ်ရိက္ခာ regurgitate ပါဘူးမစားလို့ပဲ။
Black ကစစ်သားယင်ကောင်အိမ်တော်ကိုသို့မဟုတ်လူ့အစားအသောက်သို့ကွှလာစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပါဘူး။ detritivore နှင့် coprovore သကဲ့သို့, ကြက်ဥတင်ဆောင်လာသောအမျိုးသမီးယင်ကောင်အစားအစာသို့မဟုတ်ဓာတ်မြေသြဇာပုပ်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
Black ကစစ်သားယင်ကောင်အခြားသလောက်ပျံသန်းမဟုတ်ပျံသန်း။ Black ကစစ်သားယင်ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကြီးများအဖြစ်အစားအစာကိုစားသုံးဖို့သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်နိုင်စွမ်း၏လျော့နည်းစွမ်းအင်ရှိသည်။
3 ။ BSF ယဉ်
Black ကစစ်သားတစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာသူတို့မလွတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က, အိမျသို့သှားသောအခါအလွန်လွယ်ကူစွာဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပျံသန်း။
Black ကစစ်သားသန့်ရှင်းရေးပျံသန်း (clean) နှင့်ကိုက်သို့မဟုတ်လက်နက်ကြပါဘူး။ သားကောင်တွေကိုဗီဇဆန့်ကျင်မှသာကာကွယ်ရေးပျံသန်းနှင့်ဖုံးကွယ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင် pupae ၏လူဦးရေကိုလျှော့ချဖို့သူတို့ယင်ကောင်သို့ Hatch မတိုင်မီကို turn off ဖို့ဘယ်လို ddengan နိုင်ပါတယ်။
အခြားသောနည်းလမ်းအေးခဲနေသော, ခြောက်သွေ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, automated နို့တိုက်ကျွေးရေး, ဒါမှမဟုတ်ရိုင်းသောငှက်များအစာကျွေးဘို့ကြက်သား Coop စုဆောင်းခြင်းကွန်တိန်နာထဲမှာထည့်သွင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေး၏။
4 ။ BSF Way ကိုပျံ
အဆိုပါ BSF ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အသံလည်းယင်ကောင်၏အခြားအမျိုးအစားများကိုတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ လျှင်ယင်ကောင်တွေအများကြီးနဲ့တစ်ဦးဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးလောက် bsf ပြီးတော့မျှလောက်ယင်ကောင်များနှင့်ကျင်လည်ကျက်ဖို့ဝံ့တဲ့သူကိုအခြားသူများရှိပါလိမ့်မယ်။
5 ။ Pengurai အေးဂျင့်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်
တဦးတည်း BSF လောက်ခုနှစ်တွင်နှစ်ကြိမ်အလေးချိန်အဖြစ်တာအဖြစ်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်, မိလ္လာသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်စွန့်ပစ်တဲ့နေ့ကသုံးဖြုန်းနိုင်ပါ။
ဒါကကျနော်တို့ရှိပါက 100 200 ကီလိုနေ့တိုင်းအမှိုက် bsf သငျသညျအထဲက larvae ကီလိုဂရမ်ဆိုလိုသည်။ အမှိုက်သရိုက်ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အားလုံးအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်, မိလ္လာ, ခြေးနှင့်လူ့စွန့်ပစ်ကြသည်။
အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ် Feed လောက်၏ဥပမာများ
Market ကစွန့်ပစ် (ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများ)
ဥပမာအားဖြင့်စွန့်ပစ် Feed လောက်
မွေးမြူရေးချေး Feed လောက်၏ဥပမာများ
6 ။ အနံ့မရှိဘဲစင်ကြယ်သော
တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပင်မစင်ယေဘုယျအားဖြင့်အနံ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ လုံးဝအနံ့ bsf လောက်ထုတ်ပေးသည့်အမှိုက်မှမတူဘဲ။
ထိုကဲ့သို့သောသဲသို့မဟုတ် rectal အရွယ်လောက်အဖြစ်လောက်မစင်အလွန်သေးငယ် granules ။
7 ။ PH သည် Extreme ခုနှစ်တွင် Live နိုင်သလား
လောင်း bsf နာမည်ဆိုးခေါင်းမာခြင်းနှင့်အစွန်းရောက် ph မှာနေထိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ Two-လေးနာရီ, ဆား, အက်ဆစ်နှင့်အမိုးနီးယားကဲ့သို့စင်ကြယ်သောအရက်။
အအေးအပူချိန်တွင်သို့မဟုတ်မရှိအစားအစာလောက် bsf, (torpor) မလှုပ်မရှားခြင်းနှင့်မြုံ hibernating ခြင်းကိုနှင့်အပူချိန်ပုံမှန်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အခါအပေါ်ကိုပြန် switches လျှင်။
8 ။ ကြွယ်ဝသောအစာအာဟာရနှင့် Hight-ပရိုတိန်း
Magot BSF 40-56% ရေနံစိမ်းပရိုတိန်း, 30-36% အီထုတ်ယူ, 15-16% ပြာ, 4.9-5.2% ကယ်လစီယမ်နှင့်ခြောက်သွေ့ form မှာ 0.61-0.64% phosphorus ကိုပါဝင်သည်။
9 ။ သဘာဝထိန်းချုပ်ထား BSF လူဦးရေ
သာ 5-8 14 mencapi နေ့ကဝန်းကျင်ပျမ်းမျှသက်တမ်း bsf ပင်ရက်ပေါင်းနိုင်။ သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူယင်ကောင်၏ဤအဆင့်တွင်စဉ်အတွင်းမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်အားဖွငျ့မျိုးပွား။
အဖော်ရှာ, ဒါမှမဟုတ်အထီးအနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်နာရီအတွင်းသေဆုံးပါလိမ့်မယ်အဖော်ရှာပြီးနောက်။ နေစဉ်အနက်ရောင်စစ်သားအမျိုးသမီးသူတို့ဥကိုတင်သောပြီးနောက်သေဆုံးပါလိမ့်မယ်ပျံသန်း။
10 ။ လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးကြီးထွားအလွန်မြန်
အဆိုပါစွန့်ပစ်၏ပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်အမှိုက်သရိုက် Kohe အတွက် feed ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်, အသစ်ပေါက်မည့်လောက်ပျမ်းမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူဇာတ်စင်အကြောင်းကို 18 ရက်ပေါင်းကြာရောက်ရှိဖို့သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အလောင်းတွေ၏ရက်သတ္တပတ်နှစ်ခုအတွင်းအချိန်တွေထဲမှာ instar သာ. ကြီးမြတ် 15.000 အဆမပေါက်ပါဘူး။
အတော်များများကမြိုးဆကျခက်ခဲပြီးအလွန်စျြခွငျးမတ်ေတာငါး, ငှက်နှင့်တွားသွားသတ္တဝါများထဲမှာမသည်သားလောင်း texture များအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်း၏အသက်အရွယ်မှာ magotnya အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
11 ။ အဆိုပါအတော်များများဥထုတ်လုပ်သူများ
BSF အမျိုးသမီး 185 အကြားချနိုင် - 1.230 ကြက်ဥ။ ဤရွေ့ကားကြက်ဥအစားအစာသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ကျော်ပေမယ့်အစားအသောက်များအပြင်တွင်တိုက်ရိုက်ထားရှိကြသည်မဟုတ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ bsf ၏ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားအချိုးကျအရေအတွက်ကအဖြစ်ကြက်ဥအရေအတွက်။ ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားရှိပြီးတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်တောင်ပံတစ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သေးငယ်တောင်ပံရှိသည်သောယင်ကောင်ထက်ပိုကြက်ဥဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုသူ BSF အမျိုးသမီး။
နှစ်ရက်ပြီးနောက်လေးရက်မှကြက်ဥကိုသင် 1 instar နှစ်ခုမှသုံးပတ်ကြာအတွင်း instar6ကြီးပြင်းလောင်းသို့ Hatch ပါလိမ့်မယ်။
25 မီလီမီတာအကြောင်းကို 35-2 ° C.Ukuran အကြားဘယ်မှာ suppluy အလုံအလောက်အစားအစာနှင့်လေထုအပူချိန်အသစ်ပေါက်လောင်းသင်အခြေအနေများအောက်တွင်, ထို့နောက်5မီလီမီတာအထိမပေါက်ပါဘူး။ နှင့် 1,5-2 စင်တီမီတာအထိကြီးထွားဖို့အသားအရေကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်။
12 ။ လောက် BSF အစုံစားသတ္တဝါများ
လောက် BSF လူသားတို့စားသုံးဘာမှစားနိုင်နှင့်အလျင်အမြန်အမှိုက်သရိုက်, မိလ္လာနှင့် Kohe ဖြိုဖျက်နိုင်။
ငြိမ်ဝပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူများစွာတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်လောက် BSF စေသည်အရာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်အစာကျွေးခြင်းအရင်းအမြစ်နှင့်မီဒီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၌များစွာသောရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးလုနီးပါးအခမဲ့ရနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်သင်တန်း mengemabangkan တဲ့သူလယ်သမားများအတွက်လောက် feed ကိုသတင်းရင်းမြစ်ရတဲ့၏လွယ်ကူ။
13 ။ Size ကိုပြည်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်နေသောူပည်သူ။
အထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းငါးနှင့်ကြက်အဖြစ်လောက်လောက်ထုတ်လုပ်ကျယ်ပြန့်သောပြည်၌မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကနဦးရဲ့အရွယ်အစား 3x4 မီတာနှင့်အတူအိမ်၏ကားရပ်နားအများကြီး, ဘက်နှင့်ကျော၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျခေတ်သစ် BSF လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးချီတက်ခဲ့ကြရင်တောင် Kebumen မွို့တှငျမိတျဆှမြေား Yuri BSF အဖြစ်အိမ်တွင်၎င်း၏စိုက်ပျိုးမှု၏အနံ့မရှိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ငါးလယ်သမား, ကြက်ဘဲနှင့်တွားသွားဘို့ bsf တိရိစ္ဆာန်အဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အစာကျွေးခြင်းအရောအနှောသို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းများ၌ပိုး။
14 ။ လွယ်ကူပြီးလက်တွေ့
ရက်အတွင်းလောက် BSF ပြီးသားရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီးသိုးနွားအားပေးပြီးမှ။ Panenya လည်းအလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လောက် BSF သဘာဝကျကျငါအရွယ်ရောက်ပြီးသူ bsf ပျံသို့နောက်ဆုံးမှာ Hatch မတိုင်မီ pupa သို့ထောင်ချခံရခြင်းနှင့်အသွင်ပြောင်းခံရဖို့မှောင်မိုက်ပြီးခြောက်သွေ့သောအရပ် (ကိုယ်ပိုင်ရိတ်သိမ်း) မှမီဒီယာအမှိုက်စွန့်ခွာသွားကြီးပြင်းအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
15 ။ ပရိုတိန်း၏ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသတင်းရပ်ကွက်များ
ဒါကရောထွေးနှင့်သတင်းရပ်ကွက်များထဲကအပြေးစိတ်ပူခံရဖို့မသကဲ့သို့လောက်အချိန်ဟာအလွန်ကြာမြင့်စွာကာလ၌သဘာဝ BSF bsf နှင့်ရရှိနိုင်ပျံကိုဆိုလိုသည်။
16 ။ High-ကယ်လိုရီ
မွေးမြူရေးလှုပ်ရှားမှုလောက် BSF ထံမှစားကယ်လိုရီကထောက်ခံသည်ကို ထောက်. ။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာကယ်လိုရီငါး၏ကိုယ်ထည်အားဖြင့်လိုအပ်မယ့်မြင့်မားတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်ပါသည်, ငှက်နှင့်တွားသွားလည်းလူ့များမှာပါးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါဆန့်ကျင်နေတဲ့ Bai ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းစွာရွှေ့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်အဆီ 9,2 များအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါးခူ၏, ထိုကယ်လိုရီလိုအပ်ချက် - 10,1% သည်ဤလိုအပ်ချက်လောက် BSF ထံမှရနိုင်ဖြည့်ဆည်းရန်။
တစ်ဦးအဆီအကြောင်းအရာ 29,65 (Fahmi et el, 2007) ရှိပါတယ်ရာလောက်။ အသက်၏ဘေးထွက်ကနေကြည့်ရှုအားပေးလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ဖလောင်းကောင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား% အာဟာရအစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။
နေ့အပူပိုင်းပစ္စည်းများ (ကယ်) Crude ပရိုတိန်း (က CP) ကြမ်းတမ်းသောအဆီအဘူ Rough
(အခြားတိရစ္ဆာန်များအဘို့တိုက်ကျွေး overdo ဖို့မဒါအဖြစ်စစ်ဆေးပါ) လောက်အဆီအကြောင်းအရာငါး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထက်အများကြီးပိုမြင့်ကိုကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးငါးပိသို့မှာ BSF သော်လည်းဒါပေါ်မုန့်ညက်, လုံးလေးများလောက်နှင့်ပိုးသင့်တယ်။
17 ။ အလားအလာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ
တစ်နှစ်ကနေတိရိစ္ဆာန်ထုတ်လုပ်မှုမှတစ်နှစ် forage ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှုနှုန်း% -6,2 8,1 2018% ကိန်းဂဏန်းအတွက်အစာကျွေးခြင်း၏ 19,4 တန်ချိန်သန်းပိတ်လိုက်တယ်။
တိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းလောက်ထုတ်လုပ်မှု menajdi ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏ပြင်းအားကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းပါစေ။
ထိုသို့အနံ့မရှိဘဲလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးနှင့်အတူစတင်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးဘို့အလို့ငှာလုံခြုံပြီးအဆင်ပြေလူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်သရုပ်ပြအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
စတင်ရန်ကျွန်တော်တစ်ဦးသေးငယ်တဲ့သို့မဟုတ် home-based ပထမဦးဆုံးတွင်ဤအခွင့်အလမ်းများကိုသို့ရနိုငျပါ။
18 ။ အင်ဒိုနီးရှားရာသီဥတုကောင်းသလား
အင်ဒိုနီးရှားရှိအပူပိုင်းရာသီဥတုပျံနှင့်အတူ BSF (အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်) နေထိုင်ပြီးကောင်းမွန်စွာသားကိုမွေးလိမ့်မည်။
ဒီအပူပိုင်းရာသီဥတု၏အကျိုးကျေးဇူးများအနံ့မရှိဘဲအားလုံးခေတ်သစ် bsf လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးဖြစ်လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်:
စျေးနှုန်းချိုသာအနံ့မရှိဘဲ Bsf လောက်ခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးမှု
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုလောက်ခေတ်သစ် bsf အနံ့လွယ်ကူသော lenbih
အနံ့မရှိဘဲ Bsf လောက်ခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးမှုကိုပိုမိုအမြတ်အစွန်း
၎င်း၏အနံ့ပိုမြန်ရလဒ်များကိုမပါဘဲ Bsf လောက်ခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးမှု
နှစ်ခုသာရာသီရှိသည်သောအခြားနိုင်ငံများမှနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ။ အဆိုပါစည်အတွင်း၌အပူချိန်တည်ငြိမ်နိုင်အောင်လိုအပ်သောစည် BSF လုပ်ရှိသမျှကိုခေတ်မီခြင်းနှင့်အလင်းရောင်နှင့်အတူသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာပျံ။
Inonesia ပိုမိုတည်ငြိမ်ရာသီဥတုကြောင့်အ Indoenesia အတွက်မလိုအပ်သောနေစဉ်။ သန်းပေါင်းများစွာသောရာပေါင်းများစွာထွက် Shell ရန်မလိုအပ်နှိုင်းယှဉ် 11-2 အားဖြင့်ဗုံအောင်သည်အတိုင်း။
အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့အလုံအလောက်ငွေရှာဖို့ BSF-Rp500.000 Rp600.000 drums ။
ထိုကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်, မိလ္လာ, ချေးစသည်တို့ကိုအဖြစ် အားလုံးပစ္စည်းများကတော့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ လောက်လွယ်ကူသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လောက်များအတွက်အပိုဆောင်းအားသာချက်ဖြစ်စေရန်အခြေခံပစ္စည်းများရရှိရန်လွယ်ကူသော။
သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေအားဖြင့်စွန့်ပစ်ပယ်သွားအတွက်စွန့်ပစ်ပျော့ဖတ်, ရေနံရွှံ့နွံဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားတိရိစ္ဆာန်မစင်များအပါအဝင်နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းနှောင့်ယှက်။
အတူပစ္စည်းများ manjadikan လောက်လောက်လုပ်ငန်းရရှိမှုပိုမိုလွယ်ကူစွာအကောင်အထည်ဖော်။
အဆိုပါကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဖလောင်းကောင်ပိုးထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများသတင်းရင်းမြစ်ရရှိရန်လွယ်ကူသော Cheapening တစ်အမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစေ။
Non-အပူပိုင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းအပူပိုင်းရာသီဥတုအတွက် BSF လောက်တိုးတက်မှုနှုန်း။
အပူပိုင်းရာသီဥတုအတွက်လောက် BSF 18 ရက်ပေါင်းသာပျမ်းမျှအချိန်အတွက်ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအလောက် BSF လည်းတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်၏အသက်အရွယ်မှာရိတ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
19 ။ နေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်တင်ဆောင်လာသော
လောက်ထုတ်လုပ်ရန် bsf ဗုံအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးသင့်ကြောင်းအတော်ကြာ fittings နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကွန်တိန်နာ bsf ကြက်ဥ, ကြက်ဥသေတ္တာ, etc biotong လောက်ချဲ့ရှိပါတယ်။
BSF ဗုံအသစ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းစေရန်မလိုအပ်ပါဘူး, သငျသညျ BSF စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဗုံသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအပိုင်းအစသစ်သား, အပိုင်းအစသတ္တုနှင့်ဝါးနေအိမ်အဖြစ်အသုံးမပြုတဲ့ပစ္စည်းများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းပျံသန်းမယင်ကောင်တစ်မွေးမြူရေးနေရာတစ်ခုအဖြစ်ဖန်ဆင်း BSF လှောင်အိမ်, လိုအပ်အဖြစ် BSF ဆက်ဆက်ကြက်ဥထုတ်လုပ်မှု၏ရလဒ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် menyedialan အဆိုပါဗုံ။
ကြက်ဥ BSF များအတွက်ကွန်တိန်နာအင်တုံ, ပုံး, ဂါလံအမှတ်အသား, etc စိုးရိမ်ထိတ်လန်နိုင် ကြက်ဥအကြာတွင် tetaskan ထိုကဲ့သို့သောကွန်တိန်နာအတွင်းဗုံ BSF ထံမှသိမ်းယူသို့မဟုတ်ရိတ်သိမ်းကြသည်။
ဘယ်ဟာပိုပြီးမှန်မှန်သားကောင်တွေကိုအတွက်မျှော် sekalihgus နိုင်အောင်ထို့နောက်တစ်ဦးထိန်သိမ်းအတွက် collated ဖြစ်ပါတယ်။
BSF ကြက်ဥသေတ္တာသစ်သား, ဝါးနှင့်အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အတူ sedehana ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ တိုး biotong လွှဲပြောင်းထို့နောက်ကြက်ဥပေါက်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပျတိုးလောက်များအတွက်ကွန်တိန်နာနှင့်အမျှ Biotong ။
Biotong လုပ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းညိုညစ်ရောင်အဖြစ်ထိန်သိမ်းမှုစနစ် stacking ဖွငျ့နိုငျသညျ။ stack အဖြစ်အထက်သို့34 မှတက် Stackable ။
Biotong လည်းထိုကဲ့သို့သောငါးရေကန်ဖန်တီးစီတန်းဘိလပ်မြေအဖြစ်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့နိုင်ပြီးအမြင့်သာ 30 စင်တီမီတာအကြောင်းပါ။
20 ။ သဘာဝတရားကနေအခမဲ့ Indukan ပြီးတော့ကြက်ဥ BSF
BSF ယင်ကောင်အင်ဒိုနီးရှားရှိနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဘယ်လိုမီးဖိုချောင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထို့နောက် sires BSF လာနှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်းကွန်တိန်နာထဲမှာသူတို့ဥကိုတင်ပါလိမ့်မယ်ကွန်တိန်နာအတွက်ပေး။
21 ။ တွန်းလှန်အစိမ်းရောင်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ပျံသန်း
BSF houseflies နှင့် bluebottle အားကောင်းတဲ့အသံဖြင့်တွန်းလှန်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုပွငျဆငျသောအလွှာမီဒီယာကြောင်းဒါနှင့် houseflies နှင့် bluebottle နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမရောစပ်ရှိရလိမ့်မည်။
ဒါဟာကျနော်တို့ကဘေးဥပဒ်တင်ဆောင်လာသောယင်ကောင်များ၏လောက်မွေးမြူရေး sterile အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပွုစုပြိုးထောသို့မဟုတ်သောသူတို့အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အဆင်ပြေဘယ်သူမျှမကအနံ့။
22 ။ ကြက်သားလယ်သမားလောက် BSF အဖော်
ပိုးအနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်သိသိသာသာအီး coli 0157 လျှော့ချနိုင်သည် H7 နှင့် Salmonella enterica ကြက်သားချေးတွင်ပါရှိသော။
ပိုးအနက်ရောင်စစ်သား, 24 နာရီအတွင်းအညစ်အကြေးများ၏အော်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းကိုးညစ်ညမ်းသတ်ပစ်လျင်မြန်စွာပျံသန်း။
Black ကစစ်သားစွန့်ပစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချလျင်မြန်စွာပျံသန်း။ လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးကိုလိုနီများ၏လမ်းဖြင့်ရေငွေ့ပျံဆွေးတိုးမြှင့်, အစားအစာတက်ကိုချိုးဖျက်နှင့်အပူဖန်တီးပါ။
တစ်ဦးကသိသိသာသာငွေပမာဏကိုလည်းပိုးနှင့် symbiotic သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိ / mutualistic အားဖြင့်သုံးပါတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့သို့ကူးပြောင်းသည်။
အဆိုပါဆွေးစနစ်လောင်းပုံမှန်အား 50% ဝန်းကျင်ဆွေး၏အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းစေသည်။ 90% နှင့်အတူတကွအနံ့ Yuri BSF မရှိရင်အဆိုပါ BSF ခေတ်သစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖြန့်ကျက် BSF ပျံ
ဒီမျိုးစိတ် ecotone neotropical ထံမှမူလကဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်နီးပါးနာမည်ကျော်ဖြစ်လာအားလုံးတိုက်ကြီး, ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။
BSF အဆိုပါရီးယန်းကျွန်းဆွယ်တောင်ပိုင်းပြင်သစ်, အီတလီ, ခရိုအေးရှား, မော်လ်တာ, အရီကျွန်းစုများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်အပါအဝင်ဥရောပနိုင်ငံအများစုအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
BSF လည်း ekozon Afrotropis တှငျတှေ့ရ ekozon ဩစတြေးလျ, Nearctic, မြောက်အာဖရိက ekozon, Palaearctic အရှေ့ပိုင်း ekozon နှင့် Indomalayan ဘုံ ekozon ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးယင်ကောင်တစ်ကြိမ် 185-1.235 ကြက်ဥအကြားကြက်ဥအိပ်လေ၏။ ဤရွေ့ကားကြက်ဥပုံမှန်အားဖြင့်အက်ကြောင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်အထက်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောခြေးသို့မဟုတ်ဆွေးအဖြစ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းကပ်လျက်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့် 2-4 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုအတွက် Hatch နေကြသည်။
အသစ်ပေါက်လောင်း 0,04 လက်မ (1 မီလီမီတာ) ၏အရှည်သို့ရောက်ရှိနှင့်လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင်ရဲ့အဆုံးမှာ 1 27 ဂရမ်အထိအလေးချိန်နိုင်စွမ်းရှည်လျားသော 0,10 လက်မ (0,22 မီလီမီတာ), ရှိသည်။
လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင်ဇာတ်စင် prepupa အကြောင်းကို 18 ရက်ပေါင်းကြာမြင့်မှာ 22-7 ရက်ပေါင်းခန့်ကြာရှည်ခံသည်။ အဆိုပါလောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင်ရဲ့အရှည်အနိမ့်အပူချိန်သို့မဟုတ်အစားအစာမရှိခြင်း၏အချိန်မှာလအနည်းငယ်အတွင်းမှာနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။
Pupal ဇာတ်စင် 1 ရက်သတ္တပတ်မှ2ထံမှကြာရှည်ခံသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူယင်ကောင်5အကြားအသက်ရှင်နိုင် - သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအတွက်တဲ့အခါမှာပျားရည်သို့မဟုတ်အညိုရောင်သကြားပေးသောသို့မဟုတ်သူမ၏အကြိုက်ဆုံးသောက်ရိုင်းများတွင်ဝတ်ရည်အခါ 8 ရက်။
BSF bertamorfosis ဖြစ်တည်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမျာကိုပြန်လည်ပျံသန်း။ အပြီးအစီးသှငျပွောငျးသှားသညျမိမိအသက်တာ၌4အဆင့်ဆင့်ခံစားခဲ့ရသောဘဝသံသရာသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များ၏ဘဝသံသရာသည်။
တဦးတည်း BSF ဘဝသံသရာအတွက် 40-44 ရက်ပေါင်းအကြားကြာပါသည်။ အဆိုပါအချိန်ကာလအတွင်းထိုကဲ့သို့အပူချိန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အစားအစာအဖြစ်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
BSF အောက်ပါအဆင့်5ပိုသောအဆင့်တဆင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝသံသရာ၏ထူးခြားသောပျံ:
အဆင့်လူကြီး / Imago ယင်ကောင်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူသို့မဟုတ် imago အဆင့် shell ကိုထဲက pupae ပေါက်ပြီးနောက်ဇာတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ပျံ။ ဒီ imago အဆင့် bsf ယင်ကောင်၌သာသူ၏အသက်တာကာလအတွင်းစားမသောက်ကြဘူး။
ယင်ကောင်အသစ်ငယ်ရွယ် BSF ပေါက်နှင့်သူ၏အခွံထဲကနှင့် 12 နာရီအတွင်းတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူယင်ကောင်သို့ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
အသစ်ပေါက်ယင်ကောင်ကိစ္စတွင်ပိုးအိမ်ထဲမှထွက် လာ. ထိုနေနှင့်သောက်၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာခြင်းငှါဖို့နဲ့သွားလာလျက်ပျံသန်းပါလိမ့်မယ်။
အသက်အရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ 5-8 ရက်ပေါင်းအကြားအတော်လေးတိုတောင်း bsf ပျံတစ်ခုကိုရာသီဥတုအချက်များ, စိုထိုင်းဆနှင့်သတင်းရပ်ကွက်များကအချိုရည်တို့ကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။
အသိရင့်ကျက်အရွယ်ရောက်ပြီးနောက် BSF အဖော်ရှာသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ကြလိမ့်မည်ပျံ။ BSF အဖော်ရှာယင်ကောင်မှထိရောက်စွာသာနိုင်စွမ်းတိုတောင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်။
BSF အပင်ပန်းပွင့်တို့သည်နံနက်နှင်းနှင့်ဝတ်ရည်၏အနှစ်သက်ဆုံးသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမွေးမြူရေးလှောင်အိမ်ထဲမှာငါတို့သည်လည်းအညိုရောင်သကြားအစားပျားရည်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
မိတ်လိုက်သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်အထီး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အမျိုးသမီးမိဘချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဟု bsf မိတ်လိုက်ချဉ်းကပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးအချို့သောအဆင့်နှင့်ယာယီအထိလှည့်။
ဤသည်အဆင့်အပူချိန်ပျံအရေးပါသောအထောက်အကူပြုအချက်အပူချိန်ပင်ဖြစ်သည်ဖြစ်လာသည်။ ယင်ကောင် bsf များအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန် C. °အပူချိန် 30 မှာဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါ BSF ကသူ့တစ်သက်တာကာလအတွင်းမုန့်ညက်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်နေဆဲသောက်သုံးရပါမည်ပေမယ့်။ တစ်ဦးယင်ကောင်အပေါ်ပျားရည်၏ပုံစံအတွက်သောက်ထားခဲ့ဖို့ဂရုစိုက်ကြက်ဥထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မယ်။
သောက်သုံးရေသို့မဟုတ်ပျားရည်သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်တိုးတက်၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုပျံ bemberikan အညိုရောင်သကြားကိုရေပေးခြင်း။
အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ယင်ကောင်များ၏ extension ကိုကာလအရေအတွက်ကြက်ဥကိုတင်သောယင်ကောင်များ၏ကာလ၏အရေအတွက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
10-11 နေ့ပျားရည်သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးနေ့က BSF သေခြင်း
5-8 နေ့လွင်ပြင်သောက်ရေအားဖြင့်အထွတ်အထိပ်နေ့က BSF သေခြင်း
10-30 မိနစ်အကြား Pelu အချိန်သူမ၏ဥ, ဥဖို့တစ် bsf အမျိုးသမီး။ 546-1.505 အစေ့အကြားပျမ်းမျှအရေအတွက်ကအတူ။
အဆိုပါ BSF ကြက်ဥ-16,2 18,9 မီလီဂရမ်နှင့် 0,027-0,032 မီလီဂရမ်ကြားကကြက်ဥနှုန်းအလေးချိန်အကြားအလေးချိန်ကာလ။ နာရီ 11.00-15.00 အကြားအများအားဖြင့်တင်သော၏အထွတ်အထိပ်အချိန်။
BSF အမျိုးသမီးတစ်ဦးတည်းသာအချိန်ကို တင်. ပျံလျက်, အကြာတွင် beberpa နာရီသေဆုံးလျက်ရှိသည်။
BSF ကြက်ဥ Betina ပို
Bsf ယင်ကောင်စံပြပါဝါ 55-60% အကြားစိုထိုင်းဆအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြက်ဥအိပ်လေ၏။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူယင်ကောင် 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (75 ° F) သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတက် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (104 ° F) တွင်အပူချိန်မှာမိတ်နှင့် oviposition ပါလိမ့်မယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လယ်ပြင်၌ 99,6% oviposition 27,5-37,5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (81,5-99,5 ° F) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Quartz-အိုင်အိုဒင်းမီးခွက်ကိုအောင်မြင်စွာအရွယ်ရောက်ပြီးသူယင်ကောင်များ၏မိတ်လိုက်လှုံ့ဆော်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အပူပိုင်းအခြေအနေများအတွက်လုံလောက်တဲ့တိုက်ရိုက်နံနက်ယံ၌နေရောင်ခြည်နှင့်နေ့လည်ခင်းနှင့်အတူ BSF မိတ်လိုက်နှင့်တင်သောကြက်ဥလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်။
တိုက်ရိုက်နေရောင်မိတ်လိုက်မီနှင့်အပြီးဦးစားပေးမည် BSF ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။
70% အတွက်စိုထိုင်းဆက၎င်း၏ဘဝသံသရာ၌ရှိသမျှသောအဆင့်များအတွက်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားသည်။ အဆိုပါအလွှာဟာပိုးအိမ်များအတွက်လိုအပ်သောမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အလွှာဟာခြောက်သွေ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့စိုထိုင်းဆများတဲ့ထိန်းညှိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်စဉ်းစားသည်။
စိုထိုင်းဆ 93% မှာထိန်းသိမ်းထားသောအခါယင်ကောင် hatching ၏ 70% အဆင့်အထိ။
Black ကစစ်သားလောင်းသောလူသားမြားဖွငျ့ကိုစားနိုင်ပါတယ်ပျံသန်း။ လောင်း, ပရိုတိန်း converting အတွက်အလွန်ထိရောက်သောများမှာပြီးပြည့်စုံသောကယ်လ်စီယမ်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကြွယ်ဝ 56 ပရိုတိန်း, အထိပါဝင်သော။
အဆိုပါ 432 နာရီမှာတော့ 1 ဂရမ်အနက်ရောင်စစ်သားကြက်ဥကြက်ဥထဲမှာ 2,4 45.000 ဂရမ်ကြက်ဥထက်ပိုဆိုလိုတာက 1 ကီလိုဂရမ်ပရိုတိန်း, သို့လှည့်ပျံသန်း။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကလူ့စားသုံးမှုများအတွက်ပရိုတိန်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ကပရိုတိန်းထုတ်လုပ်ရန်, ဒါပေမယ့်စားရနိုငျသောအစားအစာထဲသို့လူ့ unconsumed ပရိုတိန်းပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဘူး။
ကြက်ဥအဆင့်2အတွင်းရာအရပ်ကိုကြာ -4ရက်။ ကြက်ဥဖြစ်ကြောင်းပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအချိန်ကွာခြားချက်။
BSF အမျိုးသမီးသူတို့ကလေးတွေကို "ဆငျးရဲသား" နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုမဟုတ်သည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင် Hatch ကသူ့ကလေးတွေကိုချစ်ခင်တစ်ခုစကားရပ်အဖြစ် damp နှင့်အတူပေါများအော်ဂဲနစ်အတွက်သူတို့ဥကိုတင်ပါလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်ပျံ။
မိဘ bsf BSF များကအရပျ၌အဘယ်မှာရှိကြက်ဥကတည်နေရာဥပမာ
သီးပြွတ်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ် 185 ကြက်ဥသို့မဟုတ်မကြာခဏ - ကြက်ဥအဆင့်များတွင်တစ်ဦးယင်ကောင် BSF အမျိုးသမီး 1.235 အကြားအဖြစ်အများအပြားကြက်ဥထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ BSF ကြက်ဥပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးသမီးမိဘအားဖြင့်နေရာချတဲ့အခါမှာအဲဒီကြက်ဥအဖြူစများမှာကနဦးခန့် 0,7mm တစ်အရှည်နှင့်အတူဘဲဥပုံဖြစ်ပါသည်။
နှင့်တဖြည်းဖြည်းထို့နောက်ရွှေအဝါရောင်မှအရောင်ကိုပြောင်းလဲ။ atu လမ်းပေါက်ပြီမဟုတ်သောငှက်ဥခွဲခြားဖို့အတွက်ကြက်ဥ BSF စစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်အနီ (လိမ္မော်ရောင်) ကိုပြောင်းလဲသွားနှင့်ကြက်ဥ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာမရှိတော့သပ်သပ်ရပ်ရပ်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်.
ဒါဟာကြက်ဥအကောင်ပေါက်ခြင်းနှင့်လောင်းသို့မဟုတ်ပိုးသို့လှည့်သို့မဟုတ်သင် larvae သို့မဟုတ် uget-uget ဖြစ်ကြောင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
BSF incubate မှမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့အမှိုက်သရိုက်, မိလ္လာနှင့်ချေးအဖြစ်မည်သည့်ပစ္စည်းကို orhanik နိုငျသညျ။
BSF လောင်းကျယ်ပြန့်ဆွေးအောင်ဖို့အသုံးပြုသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်သို့စွန့်ပစ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ Prepupa ကြက်, ငါး, ဝက်, အိမျမွှော, လိပ်, မုတ်ဆိတ်မွေးနဂါးနှင့်ပင်ခွေးကျွေးရိတ်သိမ်း။
လောင်း BSF ဇီဝလောင်စာသို့ feed ကို converting အတွက်အထိရောက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်မှုအပြင်, ယင်ကောင်များ၏မည့်လောက်လည်း frass (kasgot / အသုံးပြုသောလောက်) လို့ခေါ်တဲ့အခြားအဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များ, ထုတ်လုပ်ရန်။
Kasgot အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင် granular နှင့်အနံ့ကျန်ကြွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်လ instars မှတဆင့်ရင့်ကျက်အဆင့် (prepupa) မဝင်ခင် BSF လောင်း။
အဆိုပါလောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးအဆင့် prepupa အတွက်သေးစား, နှင့်၎င်းတို့၏းဗိုက်ရဲ့ contents သွန်ကြပြီမဟုတ်အဘယ်မှာရှိ, သူတို့ရဲ့ပါးစပ်အစိတ်အပိုင်းတောင်တက်အတှကျအသုံးပွုသောချိတ်သို့လှည့်။
ပထမဦးဆုံးအ instar အဆင့်
ဒုတိယအ instar အဆင့်နှင့်
သုံးမှ Instar အဆင့်
ဤပထမ instar ခုနှစ်တွင်အသေးစားလောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင်အစားအစာသတင်းရပ်ကွက်မှတက်ကြွစွာပါလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးအ instar လောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးအဆင့်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အမြောက်အမြားအတွက်အစားအစာကိုအပူတပြင်းလိုအပ်နေသည်။
ပြီးနောက် 1 criss -2ရက်, ပထမဦးဆုံး instar ဇာတ်စင်အရေပြားထဲကနေနှင့်ဒုတိယ instar ဇာတ်စင်သို့ detach ပါလိမ့်မယ်။
Instar အဆင့် II ကို
ဒုတိယ instar လောင်းများ၏အဆင့်များတွင်ယခုပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားကိုပထမဦးဆုံး instar ဇာတ်စင်အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ 4-5mm အကြောင်းဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံး instar အဆင့်ထက်ပိုကြီးတဲ့ပါးစပ်ရှိပါတယ်ပါပြီ။
သေးငယ်တဲ့စိမ်းခဲ့သည့် anterior spiracles အပေါ်မြင်နိုင်။ နှင့်ပိုပြီးသိသာပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လတံ့သောတတိယ instar ဇာတ်စင်သို့တဖန်ချွတ်အလွှာပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် III ကို instar
တတိယ instar လောင်းများ၏အဆင့်များတွင်ပြီးသား 15mm သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြားရှိ feed ကိုထောက်ပံ့ (လက်ရှိ) ထက်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။
အဆင့်တတိယ instar လောင်းကိုယ်ပိုင် cuticle နှင့်တက်ကြွစွာတစ်ဦးစိုစွတ်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး pupa သို့မဟုတ် Chrysalis သို့ကြီးပွားဘို့တိုက်ရိုက်နေရောင်မှကာကွယ်တွေ့ရှိရန်စေ့စပ်။
Prepupa ရွှေ့ပြောင်းဗီဇထို့နောက်လောက်လယ်သမားကိုအလိုအလျောက် prepupa သူ့ဟာသူရိတ်ဖို့အသုံးပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဘယ်လို biotong ထံမှ prepupa တက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းဧရိယာထဲသို့ကျသောလှေကားပေးခြင်းအားဖြင့်လည်းရိုးသို့မဟုတ်ရှိသည် biotong ပေးခွငျးအားဖွငျ့အလိုအလြောကျကွန်တိန်နာရိတ်ဖို့။
အဆိုပါလောင်းလျှင်မြန်စွာကြီးထွားနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးအပူချိန် 30 C. °ဖြစ်ပါသည်
Black ကစစ်သားအလုံအလောက်အားကောင်းတဲ့ပိုးပျံသန်းနှင့်တီကောင်ထက်ပိုအက်ဆစ်အခြေအနေများနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုဆီးတားနိုင်။ Black ကစစ်သားလောင်းဆောင်းရာသီတွင်ရှင်သန်နိုင်ပျံသန်း။
အဆင့် prepupa ခုနှစ်, ပိုးလောင်းတစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံကွန်ယက်ကိုပိုမိုရင့်ကျက် network ထဲသို့ကြီးထွားခဲ့သည်။
ဒီအဆင့်မှာတစ်ရက်7အကြောင်းကိုကြာပေမယ့်လည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏တည်နေရာမှာအပူချိန်ကလွှမ်းမိုး။ အပူချိန် 26-33 ° C တို့အကြားဖြစ်ပါသည်
ဤသည်၌အနက်ရောင်မှလောင်းဘဝတွင်ရှိသောပိုးဇာတ်စင်လောင်း nerubah ခန္ဓာကိုယ်အရောင် prepupa ။ အဆိုပါလောင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ပိုးလောင်းပေါ်အရောင်ပြောင်းလဲမှုကိုစိုက်ပျိုးပြီး pupa သို့မဟုတ် Chrysalis သို့လှည့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ BSF လောင်းအမျိုးသမီးမီဒီယာအတွက်ဒါမှမဟုတ်အလွှာသည်ကြာကြာထီးလောင်းထက်ဖြစ်ပါတယ်။
နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလောင်းအထီးလောင်းထက်ပိုအလေးချိန်ရှိသည်။ ဒီအဆင့်မှာတော့သဘာဝကျကျ prepupa လောင်းမီဒီယာချန်ထားမည် prepupa ။
ချိုင့်ဝှမ်း langsyng နေရောင်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာကနေကာကွယ်ပေးတဲ့အရပျကိုရှာတွေ့ခြင်း။
Prepupa သဘာဝကိုအလွယ်တကူအရွက်, အိမ်ခေါင်မိုးအုပ်ကြွပ်၏ထပ်, ခြေး၏လိပ်ခေါင်း၏ပုံတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, ရေနံ၏မိလ္လာရွှံ့နွံပုံနှင့်ဒါပေါ်မှာ။
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောကြက်သား, ငါး, ငှက်, duck, ခွေး, ကြွက်နှင့်ဒါထွက်အဖြစ်သားကောင်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိရစ္ဆာန် (သားကောင်တွေကို) များအတွက်အရသာရှိတဲ့အမဲသားနှင့်မြင့်မားသောပရိုတိန်းနဲ့တူ prepupa ။ ရပ်ရွာများကနေ့စဉ်ဘဝ၌ဤ Prepupa မကြာခဏအမြိုးအနှယျသို့မဟုတ် broodstock အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
သငျသညျသဘာဝ prepupa ရတဲ့ဒုက္ခရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်။ အဆိုပါအခြားရွေးချယ်စရာလယ်သမားလောက်ထံမှမဝယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Prepupa အရည်အသွေးမတူညီသောအခွင့်အရေး Equal
makana ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အရည်အသွေးမြင့် prepupa ထိခိုက်စေ prepupa သို့ကြီးထွားဖို့ပေါ်လောင်း feed ကို hatching ကတည်းက။
ထိုမှတပါး, prepupa ပြန်မွေးမြူဖို့မွေးမြူ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ယင်းအစာကျွေးခြင်းသာဒီလိုမျိုး၏အမှိုက်သရိုက်များသို့မဟုတ်ခြေးသို့မဟုတ်ဖွဲနုသင်တန်းပုံစံပေးထားလျှင် inudkan အဖြစ်ယုတ်ညံ့အရည်အသွေးကို prepupa ၏လိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းများ၌လောက်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုလျှင် Prepupa ဒီအမျိုးအစားသာကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ မပေးပြန်စိုက်ပျိုးအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း sires သည်။
ကြမ်းတမ်းနှင့် unpatterned နို့တိုက်ကျွေးမှု prepupa ကောင်းသောအစာအာဟာရ၏ရှားပါးမှုကြုံနေရစေမည်နှင့် broodstock အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် sires အဖြစ်ရောင်းစား feed ကိုပစ်ကပ်နားလညျပွီးပေးမလောက်လယ်သမားထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့နားမလည်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ သာကိုရောင်းကုန်သွယ်ဖို့ oriented စောင့်ရှောက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။
သို့သော် bsf ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်မွေးမြူဖို့လိုခငျြသောသူတို့အဘို့, ပေါ့ပေါ့ဆဆမျိုးစပါးကိုဝယ်ခြင်းငှါစိုက်ပျိုးမှုလောက်စတင်ရန်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်။
သငျသညျတဖနျစိုက်ပျိုးဘို့ကိုဝယ်လိမ့်မည်ဟု sires ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုလောက်ဟာသူတို့ရဲ့မွေးမြူရေးတဲ့ professional ထုံးစံပြိုးထောငျဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရပါမည်ရောင်း maggotnya oriented ။
အခြေခံအားဖြင့်လောက်ဇာတ်ကောင် "အူဝန်" ရှိပါတယ်လို့ပဲ။
တစ်ဦး Load အူကဘာလဲ?
အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအများဆုံးမကြာခဏပြန်စိုက်ပျိုးဘို့ broodstock အဖြစ်အသုံးပြုလောက်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့် ဆက်စပ်. အသုံးပြုသည်။
မတိုင်မှီ broodstock အဖြစ်အသုံးပြုအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာလောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်, ထို့နောက် prepupa broodstock အဖြစ်အရည်အသွေးကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ နှင့်အပြန်အလှန်။
အများအပြားကစီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးအထူးသသုံးဆ M ကသို့မဟုတ်မှော်မီဒီယာလောက်အဖြစ်ဝန်အူမှအားဖြည့်။
သုံးဆထုတ်ကုန် M ကသို့မဟုတ် M က3ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, Fats, ပရိုတိန်း, ဗီတာမင်, သတ္တုဓာတ်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါင်းစပ်နှင့်အစားအသောက်ဖိုင်ဘာ။
အဆိုပါ pupa သို့မဟုတ် Chrysalis ခုနှစ်, pupa ရှိရာအကောင်းဆုံးအာဟာရအတွက်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Pupa (Chrysalis) အမျိုးသမီးအမျိုးသားများထက်% -10% ပိုလေး 15 အကြားအလေးချိန်။
သူတို့ကရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက်အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်, သင်သည် pupa ၏ဘဝတိုးချဲ့လိုလျှင်အပူချိန်လမ်း 10-16 ° C တို့မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်
ဘယ်လိုလောက်သို့မဟုတ် pupa broodstock Hatch တစ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးကွန်တိန်နာအတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမည်နှင့်သူ၏စောင်အဖြစ်မီဒီယာပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးစောင် pupa အဖြစ်အသုံးပြုငါးခုအလွှာတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ပါပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာအလွှာ, သဲ, humus မြေဆီလွှာ, sawdust အသုံးမပြု။
မြေဆီလွှာတွင်အလွှာများနှင့် sawdust နှင့်အတူ Pupa ပိုမြန်သောမြေဆီလွှာသို့မဟုတ် sawdust နှင့်နေသည်ထက်။ အများဆုံးလျင်မြန်စွာ pupae ပေါက်စောင် (အလွှာ) မပေးသောဖြစ်ပါတယ်
အပူချိန်, အပူချိန် 8-11 နှင့်အတူ 29-30 ရက်ပေါင်းအကြားတစ်ဦးအကောင်းဆုံး BSF ယင်ကောင်များ၏ဘဝသံသရာ C. ° 30 ° C တို့အထက်အပူချိန်မှာအလုပျသကျဥဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
, Feed ပမာဏနှင့်ကြက်ဥဖှံ့ဖွိုးတိုးတပျံသန်းပေးသောအစာကျွေးခြင်း၏အရည်အသွေးကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ယင်းအစာကျွေးခြင်း, သာ. အဆိုပါ BSFnya Lalt ၏အာဟာရ content တွေကိုပို။ နှင့်အပြန်အလှန်။ လောက်အာဟာရချို့တဲ့ Hatch ရန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုံရလဒ်ကိုအနည်းငယ်ကြက်ဥ ssangat
အလင်း, အလင်းပြင်းထန်မှု BSF ယင်ကောင်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်။ BSF နူကွက်ကြိုက်တယ်
မီဒီယာ, မြင့်မားတဲ့အာဟာရအကြောင်းအရာနှင့်မီဒီယာလောက်၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသုံးဆ M (မီဒီယာမှော်လောက်) အဖြစ်အကောင်းဆုံးမီဒီယာ, ရေနံကိတ်မုန့် (PKM) ။
ကွဲပြားခြားနားသော BSF BSF ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း
3 အထီးအမျိုးသမီးအတွက်ဝမ်းဗိုက်ဝမ်းဗိုက်အစိတ်အပိုင်းနှင့်6ပျံ
တုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို taper ဝမ်းဗိုက်
1 ။ အမှေး
BSF ၏စိုက်ပျိုးမှုထူထောင်အတွက်အဓိကအခက်အခဲ BAU ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရှေ့ဦးစွာ မှစ. ကောင်းသောနှင့်မှန်သည်လမ်းကိုသတိပြုပါ။
သငျသညျလယ်ယာစိုက်ပျိုးအနံ့ပိုးရှိလျှင်, ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ မသက်မသာအပြင်အနံ့လည်းသားကောင်တွေကိုနှင့်ပိုးမွှားထိုကဲ့သို့သောကြွက်သကဲ့သို့, အစိမ်းရောင်ယင်ကောင်, ပိုးဟပ်, မြွေဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
ပိုးမွှားများအပြင်, အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုလယ်ယာစိုက်ပျိုးမိသားစုကန့်ကွက်သည့်လောက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းလောက်အနံ့ပြဿနာများကသူတို့လောက်ခြံမှပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်ယခုပင်လျှင်အများအပြားလယ်သမားပိတ်ဖို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။
2 ။ အနည်းငယ်ရလဒ်များ
အကြီးမားဆုံးပြဿနာအနည်းငယ်ပိုမဟုတျဘဲစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်မှုအာမခံချက် panenya ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်လောက်ထုတ်လုပ်မှုသံသရာလောင်းသို့မဟုတ်ကြက်ဥ BSF ရရှိနိုင်ပါလိမ့်ဆက်လက်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။
ဒီဖြေရှင်းချက်ထိုကဲ့သို့သော biotong အဖြစ် tools တွေကိုသုံးပြီးသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြက်ဥတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးအဖြစ် BSF လောက်သဘောသဘာဝအပေါ်တစ်ဦးကိုလိုနီတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
BSF ကတ်ထူပြားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသုံးပြီး spawn နိုင်ဆွဲဆောင်ရန်, စာအုပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်မိတ္တူအရပျ၌ကိုရောင်းငှက်ပျောရွက်သို့မဟုတ် Infra-ဘုတ်အဖွဲ့အခြောက်လှန်း။
Black ကစစ်သားယင်ကောင်ကောင်းစွာအပူပိုင်းသို့မဟုတ်နွေးသမရာသီဥတုအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသားကိုမွေးစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့တခြားရာသီဥတုအတွက်တစ်ဖန်လုံအိမ်အဆိုပါအေးကာလအတွင်းကြက်ဥရရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။
3 ။ miscast
တစ်ခုမှာယင်ကောင်များနှင့်ဖလောင်းကောင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ အတော်များများကလယ်သမားလောက် bluebottle ဖြစ်ပါတယ်ရပ်ကြီး။ ဒီအခကျြခငျြးတညျ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်ကောင်စိုက်ပျိုးခံရဖို့ထင်နေကြသည်ဆိုသောကြောင့်မယ့်အစားရောဂါသယ်ဆောင်ကြောင်းအစိမ်းရောင်ယင်ကောင်၏အင်းဆက်ပိုးမွှားယင်ကောင် bsf (အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်) ၏အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစပါးကိုဝယ်ခြင်းငှါအတင်းအဓမ္မလျှင်, ရလဒ်ကို memuasakan ဒါကြောင့်မျိုးစပါးပိုးသာလွန် BSF ကိုဝယ်ကြလော့။ လုံလောကျအမြိုးအနှယျလောက်သာလွန်တစ်သက်တာ Buy ။
ကြက်ဥတစ်ဂရမ်၏ပုံစံကိုရောင်းသော BSF မဝယ်ပါနဲ့။ သငျသညျဂရမ်နှုန်းရောင်းချ BSF ကြက်ဥကိုသင်ကြက်ဥဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူရင်းအရပျကနေ "သဿသ" တွင်ကျိုးသည်ကိုဝယ်ယူနေကိုဆိုလိုသည်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကြက်ဥ BSF ကျိုးတွေအများကြီးပါလိမ့်မည်ခြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကကြက်ဥကျိုးသည်ကိုဝယ် Hatch လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထုပ်ပိုးကြက်ဥကျိုး Hatch မည်မဟုတ် bsf ကြက်ဥထဲမှာရရှိလာတဲ့ haphazardly stacked ကြသောအခါဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
မိမိအဖြေရှင်းချက်ဝယ်ယူ BSF ကြက်ဥကြက်ဥကိုတင်သောမွေးမြူရေးယင်ကောင်များ၏အနေအထားအဖြစ်အတိအကျတူညီနေဆဲနဂိုအတိုင်းကြောင်း "စပျစ်သီးပြွတ်" နှုန်း။
4 ။ ဖော်မြူလာတစ်ခုမှာ
83% ငွေစုပစ်မှတ်နှင့်အတူသင့်လျော်သောနို့တိုက်ကျွေးရေး၏ application ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအောင်မြင်ရန်ကျနော်တို့လုပ်ငန်းများ၌နှင့် forage ငါးနှင့်ကြက်ညာဘက်ပုံသေနည်းခံရသည့်လောက်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
5 ။ စျေးကွက်လောက်ရောထွေး
သငျသညျအခြို့သောအကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်လျှင်မူကား, ထို့နောက်သင်သည်ရောင်းချ maggotnya ဘယ်မှာသွား၏စဉ်းစားတွေးခေါ် start သင့်သလဲ
ဒီဖြေရှင်းချက်လွယ်ကူသည်ကိုသင် BSF မှ Yuri ရောင်းပိုး, သင်လက်ရှိကီလို Rp7.000 အဘိုးနှင့်လောက်လက်ခံရရှိထားပါသည်။
စျေးနှုန်းသာ kgnya နှုန်း Rp4.000-Rp5.000 န်းကျင်စျေးကွက်အထက်အလုံအလောက်မြင့်မားသည်။
Yuri BSF ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်သို့ process ဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့သငျသညျပိုးနှင့်အင်ဒိုနီးရှားကျော် 99 မြို့ကြီးများမှဖြန့်ဝေမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများမှာကိုဝယ်ကြလော့။
သင်နှင့်အနီးဆုံးမြို့အတွက် mggot ခြံအတွက်အလေ့အကျင့်သင်ယူခြင်းအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် Tel / wa 0812-2105-2808 တိုက်ရိုက် Gray က Yuri ပေါ်တွင်လိပ်စာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
6 ။ ကြီးထွားလာမဟုတ်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလောက်။ သဘာဝကျကျ, လောက်စိတ်ထုတ်လုပ်အတွက်ပထမဦးဆုံးမှာသင်သာကျိုးနွံလျှင်။
အစအဘို့ပဲတိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပို. ပို. လည်း maggotnya ဖြစ်ထွန်းနေသည်။
လူအများစုများအတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အကူအညီလိုလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် Yuri BSF လူတစ်ဦးနှုန်း Rp100.000.000 Yuri BSF ၏အပေါငျးတို့သအပေါင်းအဘော်ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း program တစ်ခုနှင့်တကွကြွလာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုချိန်ညှိရမည်ဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေရရှိရန်လိုအပ်ချက်များ Yuri BSF မှလောက်ရောင်းအကြောင်းကိုစေ့စေ့ဖြစ်ရကြမည်။ ဒီအကူအညီတွေကိုသင် Yuri BSF မှတစ်ဦးလောက်-လောက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ပြန်ရောက်ရလိမ့်မည်။
ယင်းပြန်အမ်းငွေပမာဏကိုမှာအားလုံးအကျိုးစီးပွားကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ RIBA ကိုလက်မခံကြဘူး။ ကျနော်တို့များကိုအကူအညီမဆိုတန်ဖိုးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဘယ်သူမျှမတုံး။
7 ။ လျာထားသောမဟုတ်
သင်အောင်မြင်ရသေချာကြောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးသောလယ်။ သငျသညျနေ့စဉျရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေတခြားနေရာလယ်သမားများ၏ပြဿနာများကိုသာ "အလားတူ" ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းညွှန်မှုဤကွက်လပ်သည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒီနေရာမှာအခန်းကဏ္ဍကို DUTA Yuri BSF အစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့လယ်ယာအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ မတည်ရှိပါသောအခွအေနနှင့်အညီတိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုပေး။
ဒီ BSF Yuri သံအမတ်ကြီး program နဲ့ပြီးတော့သင်တစ်ဦးတည်းမခံရ။ ပိုပြီးသင်ခန်းစာများကိုယူပြီးအားဖြင့်အတူအောင်မြင်မှုကျနော်တို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကျော်လာမှသေချာပင်ဖြစ်သည်တခြားသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
8 ။ အဘယ်သူမျှမအာမခံ
2007 ယခုတိုင်အောင်သိကြကတည်းကမိတ်ဆွေများကို Yuri BSF ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Yuri BSF ၏အရိပ်၌ရှိသေး၏။ သေးရူပီယာမရှိအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်။
Yuri ကယ့်ကိုအောင်မြင်တဲ့မိတ်ဆွေများကပြီးတော့ maggotnya ရလဒ် Yuri BSF ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းလျှင်ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူအရအတူတကွကြောင့်အောင်မြင်ဘူး။ ဒါကကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလိုအပ်ဆိုလိုသည်။
9 ။ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့စျေးကွက်
ဘယ်လိုအစာကျွေးခြင်းသည်နှင့်အမျိုးသားရေးစျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း မွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုမွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းပိုမိုသန်း 2019 20-21 ထက်တန်ချိန်မှာခန့်မှန်းနေကြသည်။ တစ်ဦးကအလွန်အကျိုးအမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း။
လယ်သမားများပိုးကောင်များမကြာခဏအရပျ၌သူတို့၏ပိုးလောင်းရ။ အများဆုံးလိမ္မာပါးနပ်လောင်းတိရိစ္ဆာန်သို့စွန့်ပစ် "မြင့်မားတဲ့အာဟာရ" အဖြစ်အသွင်ပြောင်း။
အကောင်းဆုံးကိုမြေဆီလွှာပြင်ဆင်ချက်သို့မြင့်မားတဲ့ cellulose ပစ္စည်း (စက္ကူ, ကတ်ထူပြား, အရွက်, သစ်သား မှလွဲ. စက်ရုံပစ္စည်း) ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ worms ။
ညိုညစ်ရောင်ယင်ကောင်များ၏မည့်လောက်ထုတ်လုပ်ကျန်ကြွင်းအပေါ်ကောင်းစွာကြီးထွားပေမယ့်စွန့်ပစ်ရည်အင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်နှင့် worm တွေအတွက်အရမ်းအက်ဆစ်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ပိုးကောင်များအေးသောအပူချိန်လိုအပ်နေချိန်မှာလှုပ်ရှားမှုများလောင်းခန့် 37 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (100 ° F ကို) ၏အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေမြေပြင်အခါအဆိုပါပိုးကောင်များအမှိုက်အောက်မှာရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ လောင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကမတည်ရှိခဲ့ဘူးသည့်အခါအဆိုပါပိုးကောင်များအဆိုပါ wastebasket တှငျနထေိုငျနိုငျသညျ။
အနီရောင်ပိုးအများအပြားတိရိစ္ဆာန်များမှအိမ်ရှင်နေစဉ်အစာကျွေးခြင်းအဖြစ်, လောင်း bsf, ငှက်များကူးစက်ကြောင်းကပ်ပါးပိုးတစ်ခုကြားခံအိမ်ရှင်အဖြစ်လူသိများမဟုတ်ပါဘူး။
အနောက်အာဖရိကမှာတော့ Dirhinus giffardii pupae အိပ်ချ် illucens ၏ parasitoid နှင့်အနိမ့်ကျဥထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဘယ်အထိ 72% ၏စတော့ရှယ်ယာလျှော့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါကပ်ပါးနကျယ်ကောင်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားဖြင့်ယူသွားတတ်၏တိုက်ခိုက်မှုနကျယ်ကောင်သားလောင်းတိုးကနေဧရိယာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရလိမ့်မည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုလောက်ဘို့နည်းလမ်းများစွာ။ အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာအမှိုက်သရိုက်, မိလ္လာနှင့်ချေးကဲ့သို့လောက်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။
အလွယ်တကူရယူနိုင်သောနှင့် "လုနီးပါးအခမဲ့" ကြောင်းကို select လုပ်ပါမီဒီယာကိုသုံးကြောင်းမဆိုမီဒီယာ။
မူအရလုံးကိုခြေးလောက်၏စိုက်ပျိုးမှုများအတွက်အလတ်စားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာအလွှာ unruk လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးဝယ်ယူရန်မလိုပါဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးစွန့်ပစ်ညစ်ညမ်းမှုဖြေရှင်းချက် tofu အဖြစ်မြစ်ထဲသို့စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။
အော်ဂဲနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများသို့စွန့်ပစ်ယနေ့နှင့်နေရာတိုင်းပုံ။ Budiaya မီဒီယာတစ်ဦးလောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့လောက်၏စိုက်ပျိုးမှုအတွက်မီဒီယာသို့ smpah အမှိုက်သရိုက်-အမှိုက်အသုံးချဖို့နေဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီပေးရန်တဦးတည်းအသေးစိတျအပိုငျးလျှင်အလွန်မာနထောင်လွှားခြင်းရှိကြလော့။
အမှိုက် Market က
KasGot (ယခင်လောက်) ကိုစအိုတူးမြောင်းလောက်၏ (ထိုကဲ့သို့သောသဲကဲ့သို့) သေးငယ်တဲ့လောက်၏ဖုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဂဲနစ် feed ကိုမှဆင်းသက်လာ KasGot စအိုလောက်လောက်မှတဆင့်စားပြန်ထွက်သွားသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်တီကောင်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် 'ဟုဆိုအပ်၏။ Kasgot အရည်အသွေးကိုအကြီးအကျယ်လောက်ကုသမှု၏ပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Kasgot ကိုစားကြောင်းအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ဘူး။
Kasgot နိုင်တဲ့ macro နဲ့ micro အာဟာရဗီတာမင်ဆံ့။ အလွန်ကောင်းတဲ့ Kasgot, မြေဆီလွှာအာဟာရတိုးတက်မှုများအတွက်အသီးနဲ့အရွက်၏တိုးတက်မှုနှင့်အထွက်နှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စက်ရုံအမြစ်များကြီးထွားလှုံ့ဆော်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော auxin်Kasgot ဓာတ်မြေသြဇာ။ ထိုသို့အရွက်၏အရည်အသွေးနှင့်အသီးသီးနှံထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ပိုပြီးထိရောက်သက်သေပြခဲ့သည်ကြောင့်ဒီလယ်သမားများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များလောက်သို့မဟုတ်တီကောင်ကနေရရှိလာတဲ့ Kasgot မြေဆီလွှာတွင်ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်လိုအပ်အာဟာရအတွက်အလွန်ကြွယ်ဝနေသည်။
Kasgot ပြည့်စုံအာဟာရ (မက္ကရိုနဲ့ micro ဓာတု) ပါရှိသည်။ ပြီးသားနှစ်ကြိမ်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၏ပြိုကွဲကြုံတွေ့ kasgot လုပ်ငန်းစဉ်၌တည်၏။
ဖလောင်းကောင်အစာစားခြင်းမပြုမီဘက်တီးရီးယားယခုအချိန်တွင်၏ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ဒုတိယအနေလောက်သူ့ဟာသူ, ဆိုလိုသည်မှာနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်အခါအစာအိမ်လောက်အတွက်လက်ရှိအဆိုပါအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်း။
ဘယ်ထို့နောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ပြိုကွဲ။ ဒါကြောင့်ဇီဝ degradation လောက်အင်ဂျင်အဖြစ်လူသိများသည်။
လျင်မြန်စွာအပင်၏ကြီးထွားအတွက်ကူညီပေးဖို့သကဲ့သို့, အပင်များနှင့်ဟော်မုန်းကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ kasgot င်ပိုးမွှားများနှင့်စက်ရုံတိုးတက်မှုနှုန်းကစုပ်ယူ kasgot အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဓာတုဒြပ်စင်များအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
အများကြီး kasgot ပေါ်တွင်စက်ရုံအားဖြင့်လိုအပ်သည့်ပုံစံသို့အာဟာရများလွှတ်ပေးရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ဝတ်ပြုသောပိုးမွှားများ၏အရေအတွက်။
N ကို, P ကို, K သည် POC KasGot (အသုံးပြုထားတဲ့လောက်) ၏နှိုင်းယှဉ်
N ကိုများ၏ content
: P များ၏ content
K သည်များ၏ content
2 တီကောင် 1,38 4,23 1,22
3 နွားခြေး 0,96 0,68 1,68
4 မြင်းနောက်ချေး 0,49 0,73 0,83
5 ကြက်သားချေး 2,72 6,32 2,03
6 ဖုန် duck 0,84 1,81 0,42
7 ဆိတ်သငယ်ကိုကြမ်းတပြည်ကို 0,61 0,31 0,18
8 ဝက်နောက်ချေး 1,24 1,83 0,74
အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ Kasgot များ၏ content
ယင်းလောက်အားပေးပြီးမှအစာကျွေးခြင်း၏အရင်းအမြစ်ပေါ် မူတည်. အသုံးလောက်၏အာဟာရအကြောင်းအရာ။
kasgot အားလုံးကိုအာဟာရမျိုးစုံ feed ကိုပိုပိုမိုကွဲပြားခြားနား။ သို့သော်ယေဘုယျအတွက်အာဟာရအကြောင်းအရာ kasgot အောက်ပါအတိုင်း:
နိုက်ထရိုဂျင် (N) တို့ 0,63%
phosphorus (P), 0,35%
ပိုတက်ဆီယမ် (K) 0,20%
ကယ်လ်ဆီယမ် (Ca) 0,23%
မဂ္ဂနီစီယမ် (Mg) 0,26%
ဆိုဒီယမ် (Na) 0,07%
ကြေးနီ (Cu) 17,58%
ဇင့် (Zn) 0,007%
Manganium (MN) 0,003%
သံ (Fe) 0,79%
boron (B) မှ 0,21%
molybdenum (Mo) 14,48%
ရေ 41,23% သိုလှောင်ရန်စွမ်းရည်နှင့်
Humus အက်ဆစ် 13,88%
ဓာတ်မြေသြဇာ kasgot အောင်ဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းများများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်မြေသြဇာကဓာတုပစ္စည်း၏အခမဲ့ကြောင့်မြေဆီကိုပျက်စီးစေမပေး kasgot ။ ဒါဟာ kasgot ဓာတ်မြေသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သုံးနိုငျနှင့်မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးစေသည်။
စက်ရုံ၏ထိရောက်မှုအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဓာတ်မြေသြဇာသဘာဝကျကျ kasgot ဖန်ဆင်းထားသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်မြေသြဇာ Kasgot ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ်
တန်ဆာဆင်သောအပင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးသောအသီးအပင်•အများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးထွားကူညီပေးခြင်း။ ပိုပြီးထူးခြားဆန်းပြားဖြစ်လာပင်၏အသွင်အပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကိုကူညီပါ။
ပန်းပွင့်အရောင်, texture နှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားပိုမိုကောင်းမွန်ကောက်ပဲသီးနှံများကို။ အဆိုပါ seedbed စိုက်ပျိုးခြင်းမီဒီယာအဖြစ်အလွန်ကောင်းသော Kasgot ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဓာတုနှင့်ဇီဝမြေဆီလွှာကိုတိုးတက်လာဖို့ဟော်မုန်း်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတုပစ္စည်းမပါဘဲရေရှည်အတွက်သုံးစွဲဖို့ကို Safe ။
ကြီးမားသောမြေ 1 များအတွက်3တိုင်း 6m10 kasgot ကီလိုဂရမ်စဉ် potted 10kg 2kg များအတွက် Kasgot ဓာတ်မြေသြဇာ, ရောနှောသောမြေဆီလွှာ kasgot
စက်ရုံနှင့်မြေဆီလွှာအရည်အသွေး Kasgot အလွန်အမင်းမှီခိုထိုးတိုးပွားလာကြပါလိမ့်မည်။
အရည်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ (POC) လောက်နိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာ, phosphorus ကို, ပိုတက်စီယမ်နှင့်ပိုပြီးရေပမာဏရှိသည်ဖို့ဖြစ်တယ်, စိတ်ကြွဆေးဆံ့၏အားသာချက်များကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပိုးမွှားများ၏ဆိုက်ရောက်တားဆီးနိုင်ဘူး။
ပိုးအရည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာတစ်ဦးအပိုဆောင်းသင်တန်းကဲ့သို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ kasgot အသုံးပြုမှုအတွက်ကြာကြာသိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်အစိုင်အခဲမီဒီယာ kasgot ။
သို့သော်လောက် POC ကိုအသုံးပြုပြီးပိုမိုလွယ်ကူစွာစက်ရုံအရွက်နှင့်အသီးတို့ကကြေညက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကြီးထွား Enhancer သစ်သီးများနှင့်မျိုးစပါးအဖြစ်အစေခံသောအခါတစ်ဦးကွဲပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်။
အရွက်နှင့်အသီးပေါက်မှစတင်အထူးသဖြင့်အခါ။ POC လောက်ကောင်းတဲ့က stomata သို့မဟုတ်အပေါက်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
ပျမ်းမျှစက်ရုံအာဟာရစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်တစ်နေ့လျှင်ထက်ပို 2% မဟုတ်ပါဘူး။
ရေကောင်းရေသန့်နှင့်အတူ POC ထည့်ပါ။21% ထက်သို့မဟုတ်ရေတစ်လီတာနှင့်အတူရောနှောတိုင်းလီတာ POC 100 လောက်သည်မှုန်ရေမွှား Conc အတွက်ရောနှောသစ်ကိုရေမပိုပြီးတာနဲ့။
•အထံမှအဆင့်ပြောင်းလဲမှုအသီး, အစေ့မြားသို့မဟုတ်ဥထုတ်လုပ်ထားတဲ့ generative သောအခါကိုလေပေါ်မှာပ။
တစ်ချိန်ကတစ်ပါတ်ခြောက်သွေ့ရာသီအတွင်း Award ဆုဇယား POC လောက်။ POC သည်3ရက်ပေါင်း semprotka ရာသီ huja မိုးရေများကဖြုန်းအခါ။
POC လောက်ထိုးအပင်များကချိန်ညှိထားရမည် POC လောက်ပေးထားပါလိမ့်မည်။
အထွက်နှုန်း prepupa သို့မဟုတ်လောက်လောင်းအမျိုးမျိုးသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းများ၌ရပါမည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤသည်သီးနှံအထွက်နှုန်းလည်းပိုရှည်သောကာလ၌သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်တိုးမြှင့်ဖို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအ gunaka အတွက်လိုအပ်သည့်အခါ။
ဤရွေ့ကား, ပရိုတိန်းအားလုံးမွေးမြူရေးနှင့်ပင်လူသားမြားသဖွငျ့လိုအပ်ပါသည်။ ဒီတော့လောက်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတိရိစ္ဆာန်။ အဖြေတိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်း၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်။
Birds ဂိမ်း Feed စေရန်ကောင်းမွန်သောပိုး
Birds ဂိမ်း Anis Kembang
ငှက် Cucak Ijo
ငှက် Cucak မုတ်ဆိတ်
တေးသီးသံသောငှက်များ Cucak ရွှံ့ညွန်ထဲက
တေးသီးသံသောငှက်များ Pied Myna
Murai Batu ငှက်
ငှက် Panca Warna
ဘန်ကောက်ကြက်သား Feed သည်ကောင်းမွန်သောပိုး
ကြက်သား Mathai နှင့်
ကြက်သား Wido ဒါမှမဟုတ် Starling
အဆင်တန်ဆာကြက်သား Feed သည်လောက်ကောင်း
မီးခိုးရောင် Wood ကကြက်ဖ
ကြက်သားလဲမှို့ (တောက်ပ Hen)
ခေတ်သစ်ဂိမ်း Bantam ကြက်
ကြက်သား Phoenix မြို့
ကြက် Plymouth ရော့ခ်
ဇာတိကြက်သား Feed သည်လောက်ကောင်း
ကြက်သား Jantun ပြီးတော့
အသားစားကြက်မွေးမြူရေး Feed သည်လောက်ကောင်း
ဘရောင်း Leghorn ကြက်
ကြက်သား Cornish အဘိဓါန်လက်ဝါးကပ်တိုင်
Turken ကြက်သား (အဝတ်အချည်းစည်းလည်ပင်း)
ကြက်သား Feed ချသည်ကောင်းမွန်သောလောက်
ရိုက်ကူးခြင်း Orpington ကြက်
ရော့ခ်ပိတ်ပင် Plymouth ရော့ခ်ကြက်သား /
Rhode Island နီကြက်မ
ငါးမွေးမြူရေး Feed ငါးခူသည်လောက်ကောင်း
မွေးမြူရေး Lele Dumbo
မွေးမြူရေး Lele Masamo
မွေးမြူရေး Lele ပုလဲ
မွေးမြူရေး Lele Phyton
မွေးမြူရေး Lele Sangkuriang
Tilapia Feed စေရန်ကောင်းမွန်သောပိုး
နီလာ JICA က
နီလာက Black 69
ဖော့ဆို့ Feed စေရန်ကောင်းမွန်သောပိုး
Channa ဖော့ဆို့ Bleheri
Channa ဖော့ဆို့ Diplogramma
Channa ဖော့ဆို့ Micropeltes
Channa ဖော့ဆို့ pleuro
Duck Feed သည်ကောင်းမွန်သောလောက်
မွေးမြူရေး Bebek ဘာလီ
မိန်းမတွေက Mojosari ဘဲကျွဲနွား
ကျွဲနွား Duck Duck ရိုက်ကူးခြင်း
Cirebon ဒါမှမဟုတ် Rambon ဘဲကျွဲနွား
အိန္ဒိယ Runner ဘဲကျွဲနွား
ကျွဲနွားဘဲ Khaki Champbell
တွားသွားသတ္တဝါများ Feed စေရန်ကောင်းမွန်သောပိုး
Arowana Feed စေရန်ကောင်းမွန်သောပိုး
Koi Feed သည်ကောင်းမွန်သောပိုး
တိုက်ရိုက် Ranch မှာ?
99 တည်နေရာ Ranch Check
Yuri အဝန်း BSF
ဖုန်းနံပါတ်: ဖက်စ်: အီးမေးလ်ပို့ရန်: